Baydin Archives - Shwe Khit
၁ မငျးပိုငျတဲ့တောငျးထဲမှာ ကွကျဥ ၁ဝလုံး ရှိတယျ တဈနကေို့ ၉လုံးစားပွီး ၁ လုံးခနျြထားလို့ ၁ဝရကျကွာရငျ ဘာဖွဈမလဲ။
ကွကျဥ ၁ဝလုံး ရောကျနပွေီပေါ့ တဈလုံးလြှော့စားလိုကျတဲ့အတှကျ မငျးလညျး ဘာမှမသိသာပါဘူး။
ဆိုလိုတာက အလုပျလုပျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဝငျငှေ ၁ဝပုံ ၁ပုံကို အမွဲခနျြထားရမယျကှ။
၉ ပုံတောငျ သုံးရတဲ့အတှကျ ဒီလောကျကွီးလညျး ခြိုးခွုံရာမကွဘူး မဟုတျလား ဒါ ငါပွောခငျြတဲ့ မွပေုံ ၁ ကှ။
၂။နောကျတဈခုက မငျးရဲ့ဝငျငှေ ထှကျငှေ တှကေို သသေခြောခြာသိထားဖို့လိုတယျ။
မလိုအပျပဲနဲ့ ထှကျနတေဲ့ လမျး ကွောငျးတှရှေိရငျ အမွနျပိတျပဈပတေော့။
အဲလိုမှ မလုပျရငျ အိတျပေါကျ နဲ့ ဖားကောကျသလို ဖွဈနလေိမျ့မယျကှ။ ဒါငါပွောခငျြတဲ့ မွပေုံ ၂ ပဲ။
၃။တတိယတဈခုက ငှေ ကိုစုပမေယျ့ သကျမဲ့ လိုသဘောမထားရဘူး။ နှားတှေ ကွကျတှေ မှေးသလိုပေါ့။
အကောငျတှပှေား ၊ ဥတှဥေ အကောငျထပျပှားပေါ့ကှာ။ ငှေ ကိုငှခေငျြးထပျပှားနိုငျဖို့ အကြိုးရှိတဲ့နရောတှမှော ထညျ့ဝငျမွုပျနှံကှ။
အဲလိုမှ မလုပျပဲ ငှကေို သတ်ေတာ ထဲ ထညျ့သိမျးထားမယျဆိုရငျ ငှတေဟောအကွောသသှေားလိမျ့မယျ။
လဖွေတျတဲ့လူလို မငျးငှတှေဟော အငျအားမရှိတော့ဘူး ပေါ့။ဥပမာကှာ ငါ့သား မှေးတုနျးက ငါငှလေေး နညျးနညျးအတိုးခထြားတယျ။
ရတဲ့အတိုးတှကေိုမသုံးပဲ အရငျးထဲထပျမွုပျတယျ အဲဒီကနအေတိုးပွနျဖွဈ ငါ့သား ၁၂နှဈရောကျလို့ ကြောငျး ပို့မယျလုပျတော့ ငှကေိုပွနျထုတျလိုကျတာ မနညျးပါဘူးကှာ ဒါဟာမွပေုံ ၃ပေါ့။
၄။နောကျတဈခုက အလုပျ လုပျတဲ့အခါမှာ လောငျးကစား မဆနျရဘူးကှ။ မွတျခငျြမွတျ မမွတျရငျသှားဟ ဆိုတဲ့သဘောမြိုးမလုပျရဘူး။
သခြောတာလောကျ ကိုယျကြှမျး ကငျြသလောကျ နိုငျသလောကျပဲလုပျရမယျ လောငျးကစားလုပျလို့ကတော့ ရလညျးခဏပဲ မှဲစရာရှိရငျ မွနျမွနျမှဲသှားလိမျ့မယျ။
တဈခါက မိုးကွိုးသှားတဈခုကို ငါ့လာရောငျးဖူးတယျ အပွောကလညျး ကောငျး လကျတှစေ့မျးပွတော့လညျး လြှပျစဈမီးလညျးငွိမျး ရဒေီယိုလညျးရပျသှားတော့ အစဈလို့ယုံသှားတယျ။
အစဈဆိုရငျပွနျရောငျးရငျ သိနျး ၂ဝလောကျ ရမှာကို ဒါနဲ့ ၁သိနျးနဲ့ဝယျလာပွီး အိမျရောကျတော့ လြှပျ စဈဓာတျမီးမပွောနဲ့ လကျနှိပျ ဓာတျမီး တောငျ မငွိမျးဘူး။
စနဈတကစြီစဉျပွီး လိမျသှားတာကှ။ တဈသိနျးမို့ပေါ့ ၁ဝသိနျးဆိုရငျ ငါခှကျဆှဲနလေောကျပွီ။
အဲဒီတော့ ပွောခငျြတဲ့ လေးအခကျြက ကိုယျမသိတဲ့ မပိုငျတဲ့အလုပျ ၊ မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျမှာ ဘာ ရငျးနှီး မွုပျနှံမှု မှမလုပျရဘူး။
၅။နောကျတဈခုက လူတဈယောကျဟာ အိမျငှား နတော မသငျ့တျောဘူး။ အခွအေနအေရ ငှားနရေငျလညျး ကိုယျပိုငျအိမျဖွဈအောငျကွိုးစားရမယျ။
အိမျငှား စရိတျဟာ ကွာလာရငျ အိမျတဈလုံး စာလောကျရှိလာတယျ စိတျရှုပျရတယျ သေးတာကွီးတာမဓာန မဟုတျဘူး။
ကိုယျပိုဖွဈအောငျကွိုးစားဖို့ပဲ။ အဲဒီအပေါကျက ငှေ အထှကျဆုံးပဲ ။ အဲဒီတော့ ကားပဲမောငျးမောငျး ၊ စကျလှပေဲထောငျထောငျ ကိုယျပိုငျ ဖွဈအောငျအရငျဆုံးကွိုးစား ။ ဒါ ငါးခုမွောကျ မွပေုံပဲ။
၆။တို့မွနျမာစကားမှာ မတျတတျစာပဲရှိတယျ၊ တုံးလုံးစာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယျ။ စကား ပဲရှိတာကှ မလိုကျနာကွဘူး။
ဒါကွောငျ့ မမြှျောမှနျးနိုငျတဲ့ အနာဂါတျ အတှကျ ပွငျဆငျမှုတှလေုပျထားရမယျ။ ရုတျတရကျကိုယျသသှေားရငျ ကနျြရဈသူ မိသားစု ကို မထိခိုကျစဖေို့ ၊
ရုတျတရကျထိခိုကျမိလို့ ဒုက်ခိတဖွဈသှားရငျ ဆကျလကျအသကျရှငျနိုငျဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမယျ။ ဒါ ခွောကျခုမွောကျမွပေုံပဲ။
၇။(၇)ခကျြမွောကျ ကတော့ ကွိုးစားမှုကို မလြှော့ဖို့ပဲ ၊ ကိုယျနဲ့ လုပျငနျး တူတှရှေိနတေယျကှ ၊ ကိုယျကရပျပမေဲ့ သူတို့ကကွိုးစားနမှော ၊
ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျ မှာ အစှမျးထကျလလေေ ဝငျငှေ ကောငျးလလေပေေါ့ကှာ ၊ မငျးသဘောပေါကျဖို့က ကိုယျ့ဆီကို အားပေးတဲ့ဖောကျသညျတို့ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတို့ ဆိုတာ စိတျခရြတာမဟုတျဘူး ..
ကိုယျ့ထကျသာတဲ့လူ ၊ တျောတဲ့သူရှိရငျ အဲဒီကို သှားကွမှာ ..အဲဒါတော့မွဲမွဲမှတျထား။
ငါပွောခငျြတဲ့ ရခုမွောကျမွပေုံက ဒါပဲ။ မငျးသဘောပေါကျဖို့ကတော့ အလုပျ တဈခုမှာ သဘာရငျ့ဝါရငျ့တာနဲ့ မကွီးပှားဘူးနျော တျောမကွီးပှားတာ..ကုလို့ပြောကျတဲ့ဆရာဝနျဆီကိုပဲ လူနာက သှားမှာနျော.
မှတျသားစရာအခကျြကလေးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ “မိတျဆှေ page” စာဖတျသူမြားအတှကျ သငျ့တျောသလိုပွနျလညျရေးသားဝမြှေလိုကျပါတယျ ။
၁ မင်းပိုင်တဲ့တောင်းထဲမှာ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရှိတယ် တစ်နေ့ကို ၉လုံးစားပြီး ၁ လုံးချန်ထားလို့ ၁ဝရက်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရောက်နေပြီပေါ့ တစ်လုံးလျှော့စားလိုက်တဲ့အတွက် မင်းလည်း ဘာမှမသိသာပါဘူး။
ဆိုလိုတာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဝင်ငွေ ၁ဝပုံ ၁ပုံကို အမြဲချန်ထားရမယ်ကွ။
၉ ပုံတောင် သုံးရတဲ့အတွက် ဒီလောက်ကြီးလည်း ချိုးခြုံရာမကြဘူး မဟုတ်လား ဒါ ငါပြောချင်တဲ့ မြေပုံ ၁ ကွ။
၂။နောက်တစ်ခုက မင်းရဲ့ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ တွေကို သေသေချာချာသိထားဖို့လိုတယ်။
မလိုအပ်ပဲနဲ့ ထွက်နေတဲ့ လမ်း ကြောင်းတွေရှိရင် အမြန်ပိတ်ပစ်ပေတော့။
အဲလိုမှ မလုပ်ရင် အိတ်ပေါက် နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကွ။ ဒါငါပြောချင်တဲ့ မြေပုံ ၂ ပဲ။
၃။တတိယတစ်ခုက ငွေ ကိုစုပေမယ့် သက်မဲ့ လိုသဘောမထားရဘူး။ နွားတွေ ကြက်တွေ မွေးသလိုပေါ့။
အကောင်တွေပွား ၊ ဥတွေဥ အကောင်ထပ်ပွားပေါ့ကွာ။ ငွေ ကိုငွေချင်းထပ်ပွားနိုင်ဖို့ အကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ထည့်ဝင်မြုပ်နှံကွ။
အဲလိုမှ မလုပ်ပဲ ငွေကို သေတ္တာ ထဲ ထည့်သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ငွေတေဟာအကြောသေသွားလိမ့်မယ်။
လေဖြတ်တဲ့လူလို မင်းငွေတွေဟာ အင်အားမရှိတော့ဘူး ပေါ့။ဥပမာကွာ ငါ့သား မွေးတုန်းက ငါငွေလေး နည်းနည်းအတိုးချထားတယ်။
ရတဲ့အတိုးတွေကိုမသုံးပဲ အရင်းထဲထပ်မြုပ်တယ် အဲဒီကနေအတိုးပြန်ဖြစ် ငါ့သား ၁၂နှစ်ရောက်လို့ ကျောင်း ပို့မယ်လုပ်တော့ ငွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တာ မနည်းပါဘူးကွာ ဒါဟာမြေပုံ ၃ပေါ့။
၄။နောက်တစ်ခုက အလုပ် လုပ်တဲ့အခါမှာ လောင်းကစား မဆန်ရဘူးကွ။ မြတ်ချင်မြတ် မမြတ်ရင်သွားဟ ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမလုပ်ရဘူး။
သေချာတာလောက် ကိုယ်ကျွမ်း ကျင်သလောက် နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ရမယ် လောင်းကစားလုပ်လို့ကတော့ ရလည်းခဏပဲ မွဲစရာရှိရင် မြန်မြန်မွဲသွားလိမ့်မယ်။
တစ်ခါက မိုးကြိုးသွားတစ်ခုကို ငါ့လာရောင်းဖူးတယ် အပြောကလည်း ကောင်း လက်တွေ့စမ်းပြတော့လည်း လျှပ်စစ်မီးလည်းငြိမ်း ရေဒီယိုလည်းရပ်သွားတော့ အစစ်လို့ယုံသွားတယ်။
အစစ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းရင် သိန်း ၂ဝလောက် ရမှာကို ဒါနဲ့ ၁သိန်းနဲ့ဝယ်လာပြီး အိမ်ရောက်တော့ လျှပ် စစ်ဓာတ်မီးမပြောနဲ့ လက်နှိပ် ဓာတ်မီး တောင် မငြိမ်းဘူး။
စနစ်တကျစီစဉ်ပြီး လိမ်သွားတာကွ။ တစ်သိန်းမို့ပေါ့ ၁ဝသိန်းဆိုရင် ငါခွက်ဆွဲနေလောက်ပြီ။
အဲဒီတော့ ပြောချင်တဲ့ လေးအချက်က ကိုယ်မသိတဲ့ မပိုင်တဲ့အလုပ် ၊ မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်မှာ ဘာ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု မှမလုပ်ရဘူး။
၅။နောက်တစ်ခုက လူတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ငှား နေတာ မသင့်တော်ဘူး။ အခြေအနေအရ ငှားနေရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
အိမ်ငှား စရိတ်ဟာ ကြာလာရင် အိမ်တစ်လုံး စာလောက်ရှိလာတယ် စိတ်ရှုပ်ရတယ် သေးတာကြီးတာမဓာန မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ပိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲ။ အဲဒီအပေါက်က ငွေ အထွက်ဆုံးပဲ ။ အဲဒီတော့ ကားပဲမောင်းမောင်း ၊ စက်လှေပဲထောင်ထောင် ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစား ။ ဒါ ငါးခုမြောက် မြေပုံပဲ။
၆။တို့မြန်မာစကားမှာ မတ်တတ်စာပဲရှိတယ်၊ တုံးလုံးစာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယ်။ စကား ပဲရှိတာကွ မလိုက်နာကြဘူး။
ဒါကြောင့် မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားရမယ်။ ရုတ်တရက်ကိုယ်သေသွားရင် ကျန်ရစ်သူ မိသားစု ကို မထိခိုက်စေဖို့ ၊
ရုတ်တရက်ထိခိုက်မိလို့ ဒုက္ခိတဖြစ်သွားရင် ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ဒါ ခြောက်ခုမြောက်မြေပုံပဲ။
၇။(၇)ချက်မြောက် ကတော့ ကြိုးစားမှုကို မလျှော့ဖို့ပဲ ၊ ကိုယ်နဲ့ လုပ်ငန်း တူတွေရှိနေတယ်ကွ ၊ ကိုယ်ကရပ်ပေမဲ့ သူတို့ကကြိုးစားနေမှာ ၊
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ် မှာ အစွမ်းထက်လေလေ ဝင်ငွေ ကောင်းလေလေပေါ့ကွာ ၊ မင်းသဘောပေါက်ဖို့က ကိုယ့်ဆီကို အားပေးတဲ့ဖောက်သည်တို့ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တို့ ဆိုတာ စိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူး ..
ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူ ၊ တော်တဲ့သူရှိရင် အဲဒီကို သွားကြမှာ ..အဲဒါတော့မြဲမြဲမှတ်ထား။
ငါပြောချင်တဲ့ ရခုမြောက်မြေပုံက ဒါပဲ။ မင်းသဘောပေါက်ဖို့ကတော့ အလုပ် တစ်ခုမှာ သဘာရင့်ဝါရင့်တာနဲ့ မကြီးပွားဘူးနော် တော်မကြီးပွားတာ..ကုလို့ပျောက်တဲ့ဆရာဝန်ဆီကိုပဲ လူနာက သွားမှာနော်.
မှတ်သားစရာအချက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် “မိတ်ဆွေ page” စာဖတ်သူများအတွက် သင့်တော်သလိုပြန်လည်ရေးသားဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
စဈကောငျစီမှ ဖမျးဆီးထားရတဲ့ နက်ခတဆရာ လငျးညှို့တာရာရဲ့ ကွိုတငျ ဟောခကျြထဲက တကယျထပျဖွဈလာ သညျ့ အခကျြမြား
အဖမျးခံထားရတဲ့ ဆရာလငျးညို့တာရာရဲ့ ဟောခကျြထဲက နံပါတျ ၁၀ ၁၄ တကယျဖွဈလာပွနျပွီ စဈအာဏာရှငျကဆြုံးရေး လူမှုကှနျရကျတှငျ အစီအရငျမြား တငျသဖွငျ့ နိုငျငံတျောအကွညျညို ပကျြစမှေုဖွငျ့ ဖမျးဆီးခံထားရသော ဗဒေငျပညာရှငျ လငျးညို့တာရာ၏ ၂၀၂၁ ရှဖွေ့ဈဟောကိနျး (Zawgyi Code ဖွငျ့ ဖတျမရသူမြားအတှကျ အောကျတှငျ ယူနီကုဒျဖွငျ့ ဖျောပွထားရှိပါသညျ)
အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဆရာလင်းညို့တာရာရဲ့ ဟောချက်ထဲက နံပါတ် ၁၀ ၁၄ တကယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေး လူမှုကွန်ရက်တွင် အစီအရင်များ တင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြည်ညို ပျက်စေမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဗေဒင်ပညာရှင် လင်းညို့တာရာ၏ ၂၀၂၁ ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်း (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်)
Categories Baydin, ကွားသိရသမြှ Leaveacomment
သံအမတျကွီး ခငျဗြ နောကျအနှဈ၂၀ လောကျကွရငျ နောကျထပျကမ်ဘာစဈကွီးဖွဈဦးမယျ။ ဒီထကျပိုကွီးမားမယျ ။လူတှသေကွေလိမျ့မယျ ။အဲဒီစဈပွီးရငျ ခငျဗြားတို့ အမရေိကနျဟာ၂၁ရာစု လောကျထိ စူပါ ပါဝါနိူငျငံ ဖွဈလိမျ့မယျ။သံအမတျကွီး။အိုးမိုငျဂေါ့ဘုရားသခငျ ကောငျးခြီးပေးပါစေ
အမှောငျဖုံး ကွောကျလနျ့ နခြေိနျမှာ သူကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ထိတှခေံ့စားစပွေီး လူသားတှကေို အေးခမျြးစလေိမျ့မယျ။
လှတျမွောကျစလေိမျ့မယျ။ကမ်ဘာ့လူသားအားလုံးဟာအဲဒီဘာသာတရားရဲ့ စဈမှနျမှု့ကို လကျတှကေ့ငျြ့သုံးပွီး အဲဒီလူသားကို လေးစားလာကွလိမျ့မယျ။ထိုလူသား၏ပွောစကားမြားကိုလညျး တဈမ်ဘာလုံးကလူတှေ လကျခံ နားထောငျကွလိမျ့မယျ
ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။
တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကားစမည်ပြောလေသည်
ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိကျွမ်းလေသည်
သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က ကိုင်ရိုအားမေးလေသည်
မစ္စတာ ကိုင်ရိုရေ တခုလောက်ကူညီပါ။ ဘာများလဲ သံအမတ်ကြီး ။ အခုက ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပြီလေ ။ တို့အမေရိကန်တွေ မဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူတိုက် လို့ နိဂုံးချုပ်သွားပြီ
ဒီနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်တာ။ကိုင်ရိုလည်း နာရီဝက်ခန့် ကြာသော် သံအမတ်ကြီးအား ပြောလေသည်
သံအမတ်ကြီး ခင်ဗျ နောက်အနှစ်၂၀ လောက်ကြရင် နောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ဦးမယ်။ ဒီထက်ပိုကြီးမားမယ် ။လူတွေသေကြလိမ့်မယ် ။အဲဒီစစ်ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ အမေရိကန်ဟာ၂၁ရာစု လောက်ထိ စူပါ ပါဝါနိူင်ငံ ဖြစ်လိမ့်မယ်။သံအမတ်ကြီး။အိုးမိုင်ဂေါ့ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ
(၁၉၂ဝခု နှစ် က ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါသည် အဂ်လိပ် (ဗြိတိန်) နိူင်ငံ ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က အမေရိကန်သည် ဘက်စုံတိုးတက်အားကောင်းလာသော နိုင်ငံ အဖြစ် သာရှိသေးသည်
သံအမတ်ကြီး ။ဆက်ပြောပါဦး မစ္စတာကိုင်ရိုရေ။ကိုင်ရို။ အိုး….နောက်တခု ထူးခြားတာရှိသေးတယ် သံအမတ်ကြီး
ဘာများလဲ မစ္စတာကိုင်ရို ။ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်က စူပါပါဝါနိူင်ငံ ဖြစ်သလို စူပါပါဝါ လူသားတစ်ဦးလည်း ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလူသားလဲ ကိုင်ရို အမေရိကန်ကနေ ထွက်ပေါ်လာမှာလား
မဟုတ်ဘူးဗျ ဘားမား(မြန်မာ)ကနေ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ထိုအချိန်က မြန်မာပြည်အား ဘားမားဟုခေါ်ကြလေသည်။ဘယ်လိုစူပါပါဝါလူသား လည်း မစ္စတာကိုင်ရို
ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို အေးချမ်းစေပြီး ပူပန်မှု့တွေကို ဖြေဖျောက်ပေးမယ့်လူသားပါ။ကမ္ဘာကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုမယ့်လူသားပါ
ဘာသာရေးနဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေတယ် ဗျ။သူဟာ ကောင်းမြတ် စစ်မှန်တဲ့ သဘာဝတရားကြီး ကို ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ထိတွေ့သိခွင့်ရအောင် ဖြန့်ပေးလိမ့်မယ်
၂၁ ရာစု အလယ် (၂၀၅၀) လောက်ရောက် ရင် အဲဒီလူသားဟာ ဘားမား နိူင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူသမ္မတဖြစ်ရင် ဘားမားဟာ ဘုန်းမီးတောက်လိမ့်မယ်
အရမ်းကို တိုးတက်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ် ။စက်မှု့လက်မှု့ စီးပွားရေး စစ်ရေး ပညာရေး အပြင် တခြားသောအရာတွေပါ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖြစ်လာမယ်
သူ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘားမားပြည်ဟာ ပညာတတ်တွေ လူတော်တွေ အများကြီး ပေါ်ထွက်လာဦးမယ်။ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ တွေ အလျှံအပယ်ထွက်လာမယ်
သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရား(ဗုဒ္ဓဘာသာ)ကိုလည်း ကမ္ဘာအနှံ ဖြန့်ချီလိုက်မယ်။နောက်ဆုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး ကပ်ဘေး စစ်ဘေး အငတ်ဘေးတွေပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရလို့ လူသားအားလုံး
အမှောင်ဖုံး ကြောက်လန့် နေချိန်မှာ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ထိတွေ့ခံစားစေပြီး လူသားတွေကို အေးချမ်းစေလိမ့်မယ်။
လွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံးဟာအဲဒီဘာသာတရားရဲ့ စစ်မှန်မှု့ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီး အဲဒီလူသားကို လေးစားလာကြလိမ့်မယ်။ထိုလူသား၏ပြောစကားများကိုလည်း တစ်မ္ဘာလုံးကလူတွေ လက်ခံ နားထောင်ကြလိမ့်မယ်
နောက်ပိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ(ထေရဝါဒ)ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘားမားဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံများ အားလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်နိူင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်
ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး ဘာမားကို သွားရောက်လေ့လာကြလိမ့်မယ်။ နိူင်ငံရေးမှာ အမေရိကန်က စူပါပါဝါ ဖြစ်ရင် ဘားမားက ဘာသာရေးမှာ စူပါပါဝါ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်
အဲဒီ စစ်မှန်တဲ့ တရားတွေကနေပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာ စစ်ဘေး ကပ်ဘေး အငတ်ဘေးတွေ ကင်းစင်သွားမယ်
ကင်းစင်ပြီးရင် သဘာဝတရားကြီးတွေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်။သစ်တောသစ်ပင် မြစ်ရေ စမ်းချောင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်။ရာသီဥတု ကောင်းမွန်မှန်ကန်လာမယ်။ကမ္ဘာကြီးအေးချမ်းလာမယ်
ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ဟာမေတ္တာဓာတ်ကြီးမားလာမယ်။ထိုလူသားမှာ လက်နက်တခုပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလက်နက်အားလုံးကို နိဂုံးချုပ်နိူင်တယ်။(မေတ္တာလက်နက်)
မစ္စတာကိုင်ရိုမှ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအား ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြောပြပြီး ခဏ နားကာ ကော်ဖီသောက်လေသည်
သောက်ပြီးသောအခါ သံအမတ်ကြီးနှင့် အမေရိကန်နိူင်ငံ၏ ဖြစ်လာမည့် အနာဂတ်များကို ဆက်လက်ပြောနေလေတော့သတည်း
နောက်ရက်တွင်မစ္စတာကိုင်ရိုသည် ဘားမားနိူင်ငံမှ ကိုးကွယ်သော ဘာသာအားလေ့လာ ကြည့်ရာ ထိုဘာသာမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်မှန်းသိလေသည်
ခုနှဈရကျသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (နိုဝငျဘာ ၂၉ မှ ဒီဇငျဘာ ၅ ရကျနထေိ့)
November 28, 2021 by Zaw Hein
(နိုဝငျဘာ ၂၉ မှ ဒီဇငျဘာ ၅ ရကျနထေိ့)
ခရီးသှားရမညျ။ အလုပျအကိုငျလုပျရ တှငျ အတိုကျမြားနမေညျ။ စိတျလလှေငျ့မှုမြား ကွုံတှနေ့ရေမညျ။ အလုပျအကိုငျ လုပျသလောကျ အရာမထငျဖွဈနတေတျသညျ။ စကျပစ်စညျးထှကျ တတျသညျ။
ကနျြးမာရေးကောငျးသညျ။ အဖြားအနာ အနညျးငယျဖွဈမညျ။
လူမူရေးလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျနရေမညျ။ ရပျဝေးရောကျသားသမီးမြား အလုပျအကိုငျအဆငျပွေ၍ ငှဝေငျမညျ။
မီးဘေးအန်တရာယျတှတေ့တျသညျ။ အိမျထောငျရေးကံကောငျးသညျ။ အိမျထောငျဖကျမှ အားပေးစကားပွောပေးခွငျး၊ ကူညီပေးခွငျး၊ ပြျောရှငျအောငျထားပေးခွငျးမြားကွုံတှရေ့မညျ။
အခဈြရေးကံကောငျးသညျ။ အပေါငျးအသငျဂရုစိုကျပါ။ ယုံကွညျထားသော အပေါငျးမိတျဆှကေ ဒုက်ခပေးတတျသညျ။ လူယုံသတျတတျသညျ။ သီးနှံ့ဈေး ကခြွငျးမြား နဲ့ ကွုံရနိုငျ သဖွငျ့ စောလြှငျစှာ (သို့ ) နှောကျကပြွီးမှ ရိတျသိမျးပါ၊
ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၂၉၊ ၁ ရကျနမြေ့ားတှငျ ပွုလုပျပေး သငျ့သညျ။
ယတွာ- အိမျဘုရားမှာ အုနျးညှနျ့လှူပေးပါ။
အထူးယတွာ – အိမျက ဘုရား၌ မှေးနတှေ့ငျ သရဏဂုံ ၂၇ ခေါကျ ရှတျဖတျ သရစာယျပေးပါ။
ယခုအခြိနျတှငျ အလုပျအကိုငျ အဆငျပွပွေီး ပြျောရှငျနမေညျ။ ကုသိုလျကောငျးမှု အလှူဒါနပွုလုပျရမညျ။ တိုငျးပွညျအကြိုးဆောငျ လုပျငနျးမြားလုပျ ရမညျ။ သူတပါးအကြိုးကို ဆောငျရှကျရမညျ။
ဉာဏျပညာ ထကျမွတျနမေညျ့ အခြိနျဖွဈသညျ့ အတှကျ လလေ့ာမှု ပညာကောငျးမညျ။
မိမိရညျရှယျဆုံဖွတျသညျ့ အတိုငျးပွုလုပျနိုငျမညျ။ အိမျထောငျးရေး ကံမကောငျးပါ စကားမြားရမညျ။ အခဈြရေး ကံကောငျးပါသညျ။ ကနျြးမာရေး ပါးစပျနှငျ့ မကျြစိ မှာရောဂါဖွဈတတျသညျ။
ကွကျသှနျ၊ မုနျလာဥ၊ ကနျစှနျးဥ စသော ဥစား သီးနှံ့မြားစိုကျပြိုးခွငျးဖွငျ့ အကြိုးစီးပှားဖွဈအံ့။ ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၃၀ ၊ ၃ ရကျနေ့ မြားတှငျ ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ။
ယတွာ – အိမျဘုရားမှာ အုနျးညှနျ့လှူပေးပါ။ အုနျးသီးလှူပေးပါ၊
အထူးယတွာ – တနင်ျလာနေ့ တှငျ အသကျကွီးပိုငျး တဈယောကျယောကျကို ငှကွေေး လှူပါ။
ခဈြသူရညျစားတှရေ့ တတျသညျ၊ တှရေ့လြှငျကောငျးသညျ။ အပေါငျးအသငျး ဂရုစိုကျပါ မိမိသဘောထားကို အလှဲသုံးစားလုပျခွငျးခံရတတျသညျ။ သို့သျောသတိပွု၍ ဆကျဆံသငျ့ပါသညျ။
လုပျငနျးသဈအပွောငျးအလဲ ကွုံတှရေ့မညျ။ မိမိမမြှျောလငျ့ပဲ စကျပစ်စညျး ဝငျလာတတျသညျ။ ဝငျလြှငျကောငျးသညျ။ ရပျတနျ့ထားသောလုပျငနျးမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျနိုငျမညျ။ လုပျငနျးခှငျမထားပွနျလညျ အသကျဝငျလာမညျ။
အိမျမွေ ခွံ ထှကျကိနျးရှိသညျ။
ပညာရေး ပွညျပသို့သှားရောကျပညာသငျယူခငျြ စိတျမြားမကွာခဏပျေါလာမညျ။ သငျယူလြှငျကောငျးသညျ။ အဝေးရောကျသားသမီးမြား၏ သတငျးကောငျးကွားရမညျ။ အိမျထောငျးရေးကံကောငျးသညျ။ ကနျြးမာရေး ဦးဏှောကျ အားနညျးသောရောဂါလဖွေတျရောဂါ လဖွေနျး ရောဂါဖွဈတတျသညျ။
ဆနျ စပါး၊ ဆေးရှကျကွီး စသော အင်ျဂါနံ အပငျမြားနှငျ့ အကြိုးပေးသော ကာလဖွဈပါသညျ။ ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၄၊ ၅၊ ရကျနေ့ မြားတှငျ ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ။
ယတွာ – အိမျဘုရားမှာ ပနျးအဖွူရောငျ သကျစလှေူ့ပေးပါ၊
အထူးယတှာ – မလိုပါ။
ရပျတနျ့ထားသောလုပျငနျးမြားပွနျလညျ ဆောငျရှကျရမညျ့ ကာလဖွဈသညျ။ အပေါငျးအသငျးမြား အားကိုး၍မရသော အခြိနျကာလဖွဈဖွဈသညျ။ မိမိလှယျကူမညျဟု ယူဆထားသော ကိစ်စမြား အနှောကျအယှကျ ပေးခွငျးခံရတတျသညျ။
ဖုနျး နှငျ့ စကျပစ်စညျးမြား ရောငျးဝယျခွငျး၊ အိမျခွံမွေ အကြိုးဆောငျးလုပျငနျးမြား လုပျခွငျးပွညျတှငျးပွညျပ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားလုပျခွငျး အောငျမွငျမညျ။ အခဈြနှငျ့ပတျသကျပွီး စနျးပှငျ့နလေိမျမညျ။ ပညာရေးနှငျ့ အခဈြရေးမြား ရောထှေးနခွေငျမြား ကွုံနတေတျသညျ။
ကနျြးမာရေးအာရုံကွောအားနညျးခွငျး၊ သှေးတိုးရေားဂါဖွဈတတျသညျ။ အ၀ါရောငျ ပါသော အသီး အပှငျ့မြား နှငျ့ စိုကျပြိုးအောငျမွငျနိုငျမညျ၊ ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၂၉ ၊ ၂၊ ၄ ရကျနမြေ့ား တှငျပွုလုပျပေး သငျ့သညျ။
ယတွာ – အိမျဘုရားမှာ အောငျသပွလှေူပေးပါ။
အထူးယတွာ – အိမျက ဘုရား တှငျ မှေးနတှေ့ငျ အရဟံ ပုတီး ၉ ပါတျ စိတျပါ။
ပညာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ခရီးသှားရမညျ။ နိုငျငံခွား ခရီးသှားရတတျသညျ။ သှားလြှငျအောငျမွငျမှုရမညျ။ စကျပစ်စညျးဝငျမညျ။ ရှထှေကျတတျသညျ။ မိသားစုအတှငျးမှ ကနျြးမာရေးအတှကျငှကေုနျကမြှုမြားမညျ။
သားသမီးမြား၏ မင်ျဂလာသတငျးကွာရမညျ။ အလုပျအကိုငျတှငျမှနျးထားသော လုပျငနျးမြား အောငျမွငျဖွဈထှနျးမညျ။ ပွညျတှငျးပွညျပသှားလာ၍ လုပျငနျးမြားလုပျကိုငျရမညျ။ အိမျခွံမွကေိစ်စ လကျမှတျရေးထိုးခွငျး၊ စာခြုပျစာတမျးမြားခြုပျဆိုရာတှငျသတိ ဖွငျ့ဆောငျရှကျရမညျ့အခြိနျဖွဈသညျ။
ကနျြးမာရေးဦးခေါငျးနှငျ့ အူလမျးကွောငျးရောဂါမြားဖွဈပှားတတျသညျ။ အခဈြကံညံ့သညျ။ အိမျထောငျးရေး ကံမကောငျးပါ။ စိုကျပြိုးရေးနှငျ့ပတျသတျ၍ မညျသညျ့ သီးနှံ့ပငျ စိုကျစိုကျ သတိထား လုပျဆောငျရပါမညျ။ အရှုံးပျေါတတျမညျ။
ပိုးကခြွငျး ရောဂါဒုက်ခပေးခွငျးမြားဖွဈမညျ။ ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၃၀ ၊ ၅ ရကျနမြေ့ား တှငျပွုလုပျပေး သငျ့သညျ။
ယတွာ- တနင်ျလာနေ့ တှငျ အိမျဘုရားမှာ ရှကျလှ ညှနျ့ ၅ ညှနျ့လှူပေးပါ၊
အထူးယတွာ – အိမျက ဘုရား၌ မှေးနတှေ့ငျ သုဂတော ဂုဏျတျော ပုတီး ၃ ပါတျ စိတျပါ။
အစစအရာရာအဆငျပွလောမညျ့ကာလဖွဈပါတယျ၊ မိမိရပျတနျ့ထားသော လုပျငနျးကိစ်စမြားပွနျလညျ အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျရှကျရမညျ။ သို့သျော အပွိုငျအဆိုငျမြားကွောငျ့ စိတျအနှောကျ အယှကျဖွဈတတျသညျ။
အထူးသဖွငျ့ အစုရှယျယာဝငျခွငျး၊ ကုနျမာဆိုငျနှငျ့ စိုကျပြိုးရေးပစ်စညျးမြား ရောငျးဝယျခွငျးမြားမှာ အကြိုးအမွတျ ဖွဈထှနျး နိုငျသညျ။ အိမျထောငျရေးတှငျ အသိုငျးအဝိုငျး ဆှမြေိုးစကားမြားကွောငျ့ အိမျထောငျရေး အထငျအမွငျလှဲမှားမှုမြား ပျေါပေါကျလာတတျသညျ။
မိသာစုတှငျကနျြးမာရေးပွုစုစောငျ့ရှောကျမှုမြား ပွုလုပျပေးရတတျသညျ။ အခဈြရေးတှငျအသဈအဆနျးမြား တှရေ့တတျသညျ။ ကနျြးမားရေး အဖြားအနာဖွဈခွငျး၊ ခါးနာခွငျး၊ သှေးအားနညျးခွငျးခံစားရနိုငျသညျ။
ဆနျ စပါး၊ ဆေးရှကျကွီး စသော အင်ျဂါနံ အပငျမြားနှငျ့ အကြိုးပေးသော ကာလဖွဈပါသညျ။
ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၂၉၊ ၃၀ ရကျနမြေ့ား တှငျပွုလုပျပေး သငျ့သညျ။
ယတွာ – အိမျဘုရားမှာ မှေးနတှေ့ငျ ပနျးအဖွူရောငျ သကျစလှေူ့ပေးပါ၊
လုပျငနျးအတှကျ နရောသဈ မြားတှငျပွောငျးရှေ့ လုပျကိုငျရမညျ။ လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောနိုငျမညျ။ အိမျခွံမွရေောငျးဝယျခွငျးကောငျးမညျ။ မိတျဆှမြေားအတှကျ ကူညီစောငျရှောကျမှုမြားပေးရတတျသညျ။
လူစုလူဝေးမြားပွာသော နရောမြားတှငျသှားလာခွငျးမြားကွောငျ့ မိမိပိုငျပစ်စညျးမြား ကပြောကျ တတျသညျ။
စကားငွငျး ဆိုခွငျမြား တှကွေုံ့ရတတျသညျ။ ဇာတျအစရှိသောရောဂါဝဒေနာမြားခံစားရတတျသညျ။
ပဲ အမြိုးမြိုး၊ မုနျ့ညှငျး၊ ပနျး စသော ကွာသာပတေးနံ အပငျမြားဖွငျ့
အကြိုးဖွဈထှနျးနိုငျမညျ။ ပေါငျးသငျပေါငျးနှိမျ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြး ခွငျးမြားကို ဓာတျသငျ့နံသငျ့ ၁၊ ၄ ရကျနေ့ မြားတှငျ ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ။
ယတွာ – အိမျဘုရားမှာ ပဲပွုတျထမငျး လှူပေးပါ
အထူးယတွာ- အိမျက ဘုရား၌ မှေးနတှေ့ငျ အရဟံ ပုတီး ၃ ပါတျ စိတျပါ။
ခုနှဈရကျသားသမီးမြား အားလုံးအဆငျပွေ ကွပါစေ။ လိုအငျဆန်ဒမြား အမွနျ ပွညျ့ဝကွပါစေ လို့ဆုမှနျကောငျးပွုရငျး။
(စိုကျပြိုးရေး နှငျ့ နက်ခတ်တဗဒေ ပညာရှငျ
(နိုဝင်ဘာ ၂၉ မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ထိ)
ခရီးသွားရမည်။ အလုပ်အကိုင်လုပ်ရ တွင် အတိုက်များနေမည်။ စိတ်လေလွင့်မှုများ ကြုံတွေ့နေရမည်။ အလုပ်အကိုင် လုပ်သလောက် အရာမထင်ဖြစ်နေတတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းထွက် တတ်သည်။
ကျန်းမာရေးကောင်းသည်။ အဖျားအနာ အနည်းငယ်ဖြစ်မည်။
လူမူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရမည်။ ရပ်ဝေးရောက်သားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ၍ ငွေဝင်မည်။
မီးဘေးအန္တရာယ်တွေ့တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်မှ အားပေးစကားပြောပေးခြင်း၊ ကူညီပေးခြင်း၊ ပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခြင်းများကြုံတွေ့ရမည်။
အချစ်ရေးကံကောင်းသည်။ အပေါင်းအသင်ဂရုစိုက်ပါ။ ယုံကြည်ထားသော အပေါင်းမိတ်ဆွေက ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ လူယုံသတ်တတ်သည်။ သီးနှံ့ဈေး ကျခြင်းများ နဲ့ ကြုံရနိုင် သဖြင့် စောလျှင်စွာ (သို့ ) နှောက်ကျပြီးမှ ရိတ်သိမ်းပါ၊
ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၂၉၊ ၁ ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်ပေး သင့်သည်။
ယတြာ- အိမ်ဘုရားမှာ အုန်းညွှန့်လှူပေးပါ။
အထူးယတြာ – အိမ်က ဘုရား၌ မွေးနေ့တွင် သရဏဂုံ ၂၇ ခေါက် ရွတ်ဖတ် သရစာယ်ပေးပါ။
ယခုအချိန်တွင် အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်နေမည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလှူဒါနပြုလုပ်ရမည်။ တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများလုပ် ရမည်။ သူတပါးအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
ဉာဏ်ပညာ ထက်မြတ်နေမည့် အချိန်ဖြစ်သည့် အတွက် လေ့လာမှု ပညာကောင်းမည်။
မိမိရည်ရွယ်ဆုံဖြတ်သည့် အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်မည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကံမကောင်းပါ စကားများရမည်။ အချစ်ရေး ကံကောင်းပါသည်။ ကျန်းမာရေး ပါးစပ်နှင့် မျက်စိ မှာရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥ၊ ကန်စွန်းဥ စသော ဥစား သီးနှံ့များစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်အံ့။ ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၃၀ ၊ ၃ ရက်နေ့ များတွင် ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။
ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ အုန်းညွှန့်လှူပေးပါ။ အုန်းသီးလှူပေးပါ၊
အထူးယတြာ – တနင်္လာနေ့ တွင် အသက်ကြီးပိုင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ငွေကြေး လှူပါ။
ချစ်သူရည်စားတွေ့ရ တတ်သည်၊ တွေ့ရလျှင်ကောင်းသည်။ အပေါင်းအသင်း ဂရုစိုက်ပါ မိမိသဘောထားကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းခံရတတ်သည်။ သို့သော်သတိပြု၍ ဆက်ဆံသင့်ပါသည်။
လုပ်ငန်းသစ်အပြောင်းအလဲ ကြုံတွေ့ရမည်။ မိမိမမျှော်လင့်ပဲ စက်ပစ္စည်း ဝင်လာတတ်သည်။ ဝင်လျှင်ကောင်းသည်။ ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မထားပြန်လည် အသက်ဝင်လာမည်။
အိမ်မြေ ခြံ ထွက်ကိန်းရှိသည်။
ပညာရေး ပြည်ပသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူချင် စိတ်များမကြာခဏပေါ်လာမည်။ သင်ယူလျှင်ကောင်းသည်။ အဝေးရောက်သားသမီးများ၏ သတင်းကောင်းကြားရမည်။ အိမ်ထောင်းရေးကံကောင်းသည်။ ကျန်းမာရေး ဦးဏှောက် အားနည်းသောရောဂါလေဖြတ်ရောဂါ လေဖြန်း ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
ဆန် စပါး၊ ဆေးရွက်ကြီး စသော အင်္ဂါနံ အပင်များနှင့် အကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၄၊ ၅၊ ရက်နေ့ များတွင် ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။
ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ ပန်းအဖြူရောင် သက်စေ့လှူပေးပါ၊
အထူးယတွာ – မလိုပါ။
ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကာလဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်းများ အားကိုး၍မရသော အချိန်ကာလဖြစ်ဖြစ်သည်။ မိမိလွယ်ကူမည်ဟု ယူဆထားသော ကိစ္စများ အနှောက်အယှက် ပေးခြင်းခံရတတ်သည်။
ဖုန်း နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ခြင်းပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း အောင်မြင်မည်။ အချစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စန်းပွင့်နေလိမ်မည်။ ပညာရေးနှင့် အချစ်ရေးများ ရောထွေးနေခြင်များ ကြုံနေတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးအာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ သွေးတိုးရေားဂါဖြစ်တတ်သည်။ အ၀ါရောင် ပါသော အသီး အပွင့်များ နှင့် စိုက်ပျိုးအောင်မြင်နိုင်မည်၊ ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၂၉ ၊ ၂၊ ၄ ရက်နေ့များ တွင်ပြုလုပ်ပေး သင့်သည်။
ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ အောင်သပြေလှူပေးပါ။
အထူးယတြာ – အိမ်က ဘုရား တွင် မွေးနေ့တွင် အရဟံ ပုတီး ၉ ပါတ် စိတ်ပါ။
ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခရီးသွားရမည်။ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားရတတ်သည်။ သွားလျှင်အောင်မြင်မှုရမည်။ စက်ပစ္စည်းဝင်မည်။ ရွှေထွက်တတ်သည်။ မိသားစုအတွင်းမှ ကျန်းမာရေးအတွက်ငွေကုန်ကျမှုများမည်။
သားသမီးများ၏ မင်္ဂလာသတင်းကြာရမည်။ အလုပ်အကိုင်တွင်မှန်းထားသော လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပသွားလာ၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။ အိမ်ခြံမြေကိစ္စ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိုရာတွင်သတိ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးဦးခေါင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ အချစ်ကံညံ့သည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကံမကောင်းပါ။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ မည်သည့် သီးနှံ့ပင် စိုက်စိုက် သတိထား လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အရှုံးပေါ်တတ်မည်။
ပိုးကျခြင်း ရောဂါဒုက္ခပေးခြင်းများဖြစ်မည်။ ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၃၀ ၊ ၅ ရက်နေ့များ တွင်ပြုလုပ်ပေး သင့်သည်။
ယတြာ- တနင်္လာနေ့ တွင် အိမ်ဘုရားမှာ ရွက်လှ ညွှန့် ၅ ညွှန့်လှူပေးပါ၊
အထူးယတြာ – အိမ်က ဘုရား၌ မွေးနေ့တွင် သုဂတော ဂုဏ်တော် ပုတီး ၃ ပါတ် စိတ်ပါ။
အစစအရာရာအဆင်ပြေလာမည့်ကာလဖြစ်ပါတယ်၊ မိမိရပ်တန့်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများပြန်လည် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့သော် အပြိုင်အဆိုင်များကြောင့် စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်တတ်သည်။
အထူးသဖြင့် အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ကုန်မာဆိုင်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်းများမှာ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်း နိုင်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် အသိုင်းအဝိုင်း ဆွေမျိုးစကားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။
မိသာစုတွင်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင်အသစ်အဆန်းများ တွေ့ရတတ်သည်။ ကျန်းမားရေး အဖျားအနာဖြစ်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်းခံစားရနိုင်သည်။
ဆန် စပါး၊ ဆေးရွက်ကြီး စသော အင်္ဂါနံ အပင်များနှင့် အကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၂၉၊ ၃၀ ရက်နေ့များ တွင်ပြုလုပ်ပေး သင့်သည်။
ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ မွေးနေ့တွင် ပန်းအဖြူရောင် သက်စေ့လှူပေးပါ၊
လုပ်ငန်းအတွက် နေရာသစ် များတွင်ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ရမည်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းမည်။ မိတ်ဆွေများအတွက် ကူညီစောင်ရှောက်မှုများပေးရတတ်သည်။
လူစုလူဝေးများပြာသော နေရာများတွင်သွားလာခြင်းများကြောင့် မိမိပိုင်ပစ္စည်းများ ကျပျောက် တတ်သည်။
စကားငြင်း ဆိုခြင်များ တွေ့ကြုံရတတ်သည်။ ဇာတ်အစရှိသောရောဂါဝေဒနာများခံစားရတတ်သည်။
ပဲ အမျိုးမျိုး၊ မုန့်ညှင်း၊ ပန်း စသော ကြာသာပတေးနံ အပင်များဖြင့်
အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်။ ပေါင်းသင်ပေါင်းနှိမ်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ခြင်းများကို ဓာတ်သင့်နံသင့် ၁၊ ၄ ရက်နေ့ များတွင် ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။
ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ ပဲပြုတ်ထမင်း လှူပေးပါ
အထူးယတြာ- အိမ်က ဘုရား၌ မွေးနေ့တွင် အရဟံ ပုတီး ၃ ပါတ် စိတ်ပါ။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အားလုံးအဆင်ပြေ ကြပါစေ။ လိုအင်ဆန္ဒများ အမြန် ပြည့်ဝကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းပြုရင်း။
(စိုက်ပျိုးရေး နှင့် နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်
တနျခူးလမှေးဖှားသူမြားအတှကျ တဈသကျတာ ဟောကိနျးမြား
တနျခူးလမှေးဖှားသူအမြားစုတို့သညျ ပငျကိုယျစိတျဓါတျအားဖွငျ့ အလှနျသဘောထားကွီးတတျကွပါသညျ။ လှတျလပျပေါ့ပါးစှာနတေတျသညျ။ အမွဲတမျးကွညျလငျအေးခမျြးစှာနပွေီး ပွုံးပြျောရှငျမွူးစှာပွောဆိုနတေတျသညျ။ဖွတျထိုးဥာဏျကောငျးမညျ။
ဟာသဥာဏျရှငျသညျ။ အပျေါယံအားဖွငျ့ဘာမှအလေးမထားသလို ပေါ့ပေါ့တနျတနျ၊ ဘာသိဘာသာအသှငျသဏ်ဍာနျနတေတျပမေယျ့အရေးကွုံသောအခါတှငျ ရဲရငျ့ထကျမွကျစှာလုပျကိုငျနိုငျစှမျးရှိကွသညျ။ အရေးကွုံသောအခါတှငျ ခေါငျးဆောငျနရောမြိုး တှငျဝငျရောကျကာတာဝနျယူလုပျကိုငျနိုငျစှမျးရှိကွသညျကနျြအခြိနျမြားတှငျ ကွှားဝါခွငျးကငျးလြှကျ မထငျမရှားသာနတေတျသညျ။
ငါသိ၊ ငါတတျ၊ ငါသာမွတျဟူသော စရိုကျမရှိ။ ကိုယျ့အရညျအခငျြးကို ထုတျဖျောခွငျးမရှိပညာလကျသညျးဝှကျ နတေတျကွသညျ။သို့သျော တနျကူးလဖှားမြားသညျ အငွိုးအတေးကွီးသညျရငျတှငျးမာနကွီးမားသညျ။ ဒေါသထှကျလာလြှငျ ကွောကျစရာကောငျးလှအောငျ ခကျထနျလာတတျသညျ။အလှနျခေါငျးမာစှာအရှဲ့တိုကျလိုသညျ။လကျစားခလြေိုသညျ။
လူတဈယောကျအပျေါ ရနျသူဟု သတျမှတျလိုကျပါက မူလကသိမျမှမှေု့၊ လိုကျလြောမှု၊ သဘောထားကွီးမှုတို့ ပြောကျပကျြကာ စိတျရောကိုယျပါ အငွိုးတကွီးခမြှေုနျးလရှေိ့သညျ။ မညျသညျ့အခါတှငျမှခှငျ့လှတျတော့ခွငျးမရှိကာသတေပနျသကျတဆုံးလကျတုံ့ပွနျလသေညျ။
တနျခူးလဖှားတို့သညျ အမွဲတမျး လှုပျရှားရုနျးကနျ ကွိုးစားနတေတျကွသညျ။ တဈခါတဈရံ တှဝေမေိုကျမဲစှာ ပွုမူတတျကွပွနျသညျ။ ကွောကျလှယျသော ရဲလှယျသော သဘောရှိသညျ။ တဈခါတဈရံ ဘာမှ မဟုတျတာလေးမြားကို တှနျ့ဆုတျနတေတျကွပွီး၊ တဈခါတဈရံ ရဲဝံ့ပွတျသားစှာ ပွုမူနတေတျကွပွနျသညျ။ အကွံအစညျကွီးသညျအပွောကောငျးသညျ။အပေါငျးအသငျးဆနျ့သညျ။ အသှားအလာလြှငျမွနျဖွတျလတျသညျ။ အသီးအရှကျကိုပိုနှဈသကျသညျ။
တနျခူးလဖှားတို့သညျ ဘ၀ကို အမြားအားဖွငျ့ ခကျခဲကွမျးတမျးစှာ ဖွတျသနျးကွရသညျ။ အခကျအခဲမြားစှာကိုလညျး ပခုံးဖွငျ့ထမျးကာ ဖွရှေငျးပေးကွရတတျသညျ။ ကိုယျတိုငျသျောလညျးကောငျး၊ မိသားစုဝငျတို့တှငျ သျောလညျးကောငျး အခကျအခဲ၊ အကွပျအတညျးဖိနှိပျခြုပျခယျြမှုမြားကိုတဈခြိနျခြိနျတှငျ ရငျဆိုငျကွုံတှခေဲ့ရပွီးမှအောငျမွငျသော ဘ၀မြားကိုရောကျကွသူမြားဖွဈသညျ။ ဘ၀အစတှငျ တိုကျပှဲကဲ့သို့ ခကျခဲကပျြတညျးပွီးမှနောကျဆုံးမှာ အောငျမွငျတတျသညျ။
အထူးသဖွငျ့ စိတျမွနျသညျ။ ခေါငျးမာစှာ ငွငျးခုံလိုသညျ။ ကိုယျကိုငျစှဲသောဝါဒကို တရာသေ ဆုပျကိုငျတတျသညျ။ အစစခေါငျးဆောငျလိုတတျသညျ။ ဘယျတော့မှ မလိမျတတျ။ ဗွောငျပွောတတျ ဗွောငျလုပျတတျသညျ။ ပငျကိုယျစရိုကျအေးဆေးသလောကျ မခံခငျြစိတျကွောငျ့ တဇှတျထိုးလုပျကာ ရုတျတရကျ ထိခိုကျနဈနာတတျသညျ။မိခငျ အဈမ၊ အဖှားကဲ့သို့သော ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးသော အမြိုးသမီးကွီးတို့၏ သွဇာလှမျးမိုးမှုအောကျတှငျ ရှငျသနျကွရတတျသညျ။
မမွငျအပျသော နာမျလောကပိုငျးမှ မယျတျောကွီး တဈပါးပါး၏ စောငျ့ရှောကျခွငျးကိုလညျး ခံရတတျသညျ။ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာကို ထိနျးသိမျးပွီး ကောငျးမွတျအောငျ ပွုမူနထေိုငျပေးပါက သူမတူအောငျ အောငျမွငျကွီးပှားတတျကွလသေညျလှတျလပျမှုကို အလှနျ မွတျနိုး၏။ စှနျ့စားရသော အလုပျမြားကို အထူးနှဈသကျ၏။ ခရီးသှားလာနရေသညျကို သဘောကြ၏။ ဗဟုသုတရှာဖှလေိုကျစားလို၏။ ဗဒေငျလက်ခဏာစသောလောကီပညာမြားကို ယုံကွညျလကျခံ၍ လကျတှစေ့မျးသပျကွညျ့လို၏။
ယုံကွညျခကျြနှငျ့ ရညျရှယျခကျြကွီးမားကွသညျ။ သူတဈပါး၏ သွဇာလှမျးမိုးမှုကို အလှနျမုနျးသညျ။ စှမျးဆောငျခကျြနှငျ့ လုပျရညျကိုငျရညျ ပွညျ့ဝသျောလညျး ခေါငျးမာခွငျး၊ ကွာရှညျစှာစောငျ့စားရသညျကို သညျးမခံနိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ အောငျမွငျခါနီးမှလကျလှတျသှားရသော အခွအေနမြေိုး မကွာခဏကွုံရတတျသညျထိုမြှသာမက မိမိအရှယျရောကျခြိနျတှငျ မိဘမြားစီးပှားကဆြငျးသှားခြိနျနှငျ့ တိုကျဆိုငျသှားမှုမြိုး၊ မောငျနှမသားခငျြးတို့၏ဒဏျကိုခံရခွငျးတို့ပါ ကွုံရတတျသဖွငျ့ စီးပှားရေးတှငျ စိတျရှညျစှာ ကွိုးစားပေးမှ အောငျမွငျတတျသညျ။
အတိုကျအခံမြားနှငျ့ ကွုံသောအခါ မိုကျရူးရဲတဇှတျထိုး လုပျသဖွငျ့ နဈနာတတျသညျ။ အလုပျမကွာခဏပွောငျးလုပျခွငျးကို ရှောငျပွီး တဈခုတညျး စှဲမွဲစှာလုပျသှားပါက အထူးအောငျမွငျသူမြားဖွဈ၏။ ဘာသာရေးဦးထိပျပနျဆငျပွီးလုပျပါအထူးအောငျမွငျတတျသညျ စဈဘကျ၊ စကျမှု၊ ဆေးပညာ၊ သတငျးထောကျ၊ စိုကျပြိုးရေး၊ အခကျြအပွုတျတို့တှငျ အထူးကောငျးကြိုးပေး၏။
အခဈြရေးနှငျ့ အိမျထောငျရေး နှလုံးသားရေးတှငျ စိတျအပွောငျးအလဲမွနျသညျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမပွတျမသားဖွဈတတျသညျ။ ကိုယျ့ခဈြသူနှငျ့ နားလညျမှုလှဲမှား သဖွငျ့ မကွာခဏခဈြသောက ဝဒေနာတို့ကြိတျပွီး ခံစားရတတျသညျ။ အခဈြရေးတှငျ ကိုယျတိုငျက စိတျလှုပျရှားမှုမြားစှာဖွငျ့ အယုအယ အကွငျနာခံလိုတတျငွားကိုယျတိုငျက အေးတိအေးစကျနတေတျသဖွငျ့ အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။
ထို့အပွငျ ကိုယျထငျရာ တဇှတျထိုး ဆုံးဖွတျပွီး တဈယောကျမကောငျးတဈယောကျပွောငျး ဟူသော စိတျဓါတျကွောငျ့မှားယှငျးတတျသညျ။ အခဈြဦး၏ ပွဈသှားခွငျးခံရတတျသညျ။ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြသောအခါ တှငျ နှလုံးသားမှာဆန်ဒထကျ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျသားအပျေါတှငျ သနားစိတျ၊ သနားခဈြဖွငျ့ ရှေးခယျြတတျကွသညျ။ အိမျထောငျရေးတှငျ ဦးနှောကျကို ဦးစားပေးဆုံးဖွတျရှေးခယျြပါက ပို၍စိတျခမျြးသာကွရတတျသညျ။
ရုပျရညျတငျ့တယျတတျရုံသာမက ဆှဲဆောငျအားကောငျးသော မကျြဝနျး၊ စူးရှတောကျပသော မကျြဝနျးတို့ကို ပိုငျဆိုငျထားတတျကွသညျ။ အသားထကျ အသီးအရှကျကိုပို ကွိုကျ၏။ ကနျြးမာရအေတှကျ ကွကျသှနျနီ၊ ခငျြး၊ ငရုတျကောငျးတိုပကို ဓါတျစာအဖွဈ မကွာခဏ စားသုံးသငျ့ပါသညျ။ သတိထားရမညျ့ ဘေးအန်တရယျမြားမှာ မီးဘေးသတိထားရမညျ။ လြှပျစဈမီး ရှောဈ့ဖွဈတတျသညျ။ စကျကရိယာတို့ ထိခိုကျတတျသညျ။
လကျနကျခဲယမျးမီးကြောကျ ပေါကျကှဲမှုကို သတိပွုရမညျ။ သို့သျော ယဘေုယမြှသာဖွဈပွီး သတိထားသှားလာဆောငျရှကျက ဥပဒျကငျးမညျ။ ဦးခေါငျးနှငျ့ခွထေောကျ တို့တှငျ ထိခိုကျဒဏျရာရတတျသညျ။ အရကျသစောသောကျစားသူမြားမှာ ထိုဥပဒျအန်တရယျမြိုးအဖွဈမြားပွီး မိနျးမအဖကျြပါ ကွုံတှရေ့တတျသညျ။ သူတဈပါးက ကိုယျ့ကို အတိုကျအခံလုပျခငျြလာတတျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အရကျသစောကို ပိုဆငျခွငျသငျ့လသေညျ။
တနျခူးလမှေးဖှားသူမြားသညျ ယဉျကြေးသိမျမှမှေု့ကို သဘောကသြျောလညျးကိုယျတိုငျကမူ ခွမွေနျလကျမွနျ၊ အပွောမွနျသညျ့ တဇှတျထိုးစိတျတို့ကွောငျ့ သူမြားအမွငျတှငျ ရိုငျးစိုငျးနတေတျသညျ။ သို့သျော သဘာဝကသြော အပွငျအဆငျကို နှဈသကျပွီး ခတျေပျေါဒီဇိုငျး အ၀တျအစားတို့ကို နှဈသကျတတျသညျ။ လူစုလူဝေးတှငျ ဟေးလားဝါးလား မနတေတျ။ သှကျလကျသပျရပျစှာ ၀တျစားတတျကွသညျ။ အရောငျအားဖွငျ့ ပနျးရောငျ၊ အနီရောငျ၊ ကွကျသှေးရောငျတို့ကို သုံးစှဲသငျ့သညျ။ အနကျရောငျကို အထူးရှောငျသငျ့ပါသညျ။
ပတ်တမွားနှငျ့စိနျကို အထူးဝတျဆငျသငျ့သညျ။ အထူးသဖွငျ့ ပတ်တမွားလကျစှပျကို လကြာင်ျဘကျလကျခလယျ တှငျ ၀တျဆငျသငျ့ပသေညျ။
တန်ခူးလမွေးဖွားသူအများစုတို့သည် ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် အလွန်သဘောထားကြီးတတ်ကြပါသည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေတတ်သည်။ အမြဲတမ်းကြည်လင်အေးချမ်းစွာနေပြီး ပြုံးပျော်ရွင်မြူးစွာပြောဆိုနေတတ်သည်။ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းမည်။
ဟာသဥာဏ်ရွှင်သည်။ အပေါ်ယံအားဖြင့်ဘာမှအလေးမထားသလို ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ ဘာသိဘာသာအသွင်သဏ္ဍာန်နေတတ်ပေမယ့်အရေးကြုံသောအခါတွင် ရဲရင့်ထက်မြက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အရေးကြုံသောအခါတွင် ခေါင်းဆောင်နေရာမျိုး တွင်ဝင်ရောက်ကာတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်ကျန်အချိန်များတွင် ကြွားဝါခြင်းကင်းလျှက် မထင်မရှားသာနေတတ်သည်။
ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါသာမြတ်ဟူသော စရိုက်မရှိ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိပညာလက်သည်းဝှက် နေတတ်ကြသည်။သို့သော် တန်ကူးလဖွားများသည် အငြိုးအတေးကြီးသည်ရင်တွင်းမာနကြီးမားသည်။ ဒေါသထွက်လာလျှင် ကြောက်စရာကောင်းလှအောင် ခက်ထန်လာတတ်သည်။အလွန်ခေါင်းမာစွာအရွဲ့တိုက်လိုသည်။လက်စားချေလိုသည်။
လူတစ်ယောက်အပေါ် ရန်သူဟု သတ်မှတ်လိုက်ပါက မူလကသိမ်မွေ့မှု၊ လိုက်လျောမှု၊ သဘောထားကြီးမှုတို့ ပျောက်ပျက်ကာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အငြိုးတကြီးချေမှုန်းလေ့ရှိသည်။ မည်သည့်အခါတွင်မှခွင့်လွှတ်တော့ခြင်းမရှိကာသေတပန်သက်တဆုံးလက်တုံ့ပြန်လေသည်။
တန်ခူးလဖွားတို့သည် အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားရုန်းကန် ကြိုးစားနေတတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တွေဝေမိုက်မဲစွာ ပြုမူတတ်ကြပြန်သည်။ ကြောက်လွယ်သော ရဲလွယ်သော သဘောရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးများကို တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ပြုမူနေတတ်ကြပြန်သည်။ အကြံအစည်ကြီးသည်အပြောကောင်းသည်။အပေါင်းအသင်းဆန့်သည်။ အသွားအလာလျှင်မြန်ဖြတ်လတ်သည်။ အသီးအရွက်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
တန်ခူးလဖွားတို့သည် ဘ၀ကို အများအားဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းကြရသည်။ အခက်အခဲများစွာကိုလည်း ပခုံးဖြင့်ထမ်းကာ ဖြေရှင်းပေးကြရတတ်သည်။ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိသားစုဝင်တို့တွင် သော်လည်းကောင်း အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမှအောင်မြင်သော ဘ၀များကိုရောက်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဘ၀အစတွင် တိုက်ပွဲကဲ့သို့ ခက်ခဲကျပ်တည်းပြီးမှနောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင်တတ်သည်။
အထူးသဖြင့် စိတ်မြန်သည်။ ခေါင်းမာစွာ ငြင်းခုံလိုသည်။ ကိုယ်ကိုင်စွဲသောဝါဒကို တရာသေ ဆုပ်ကိုင်တတ်သည်။ အစစခေါင်းဆောင်လိုတတ်သည်။ ဘယ်တော့မှ မလိမ်တတ်။ ဗြောင်ပြောတတ် ဗြောင်လုပ်တတ်သည်။ ပင်ကိုယ်စရိုက်အေးဆေးသလောက် မခံချင်စိတ်ကြောင့် တဇွတ်ထိုးလုပ်ကာ ရုတ်တရက် ထိခိုက်နစ်နာတတ်သည်။မိခင် အစ်မ၊ အဖွားကဲ့သို့သော ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသော အမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရှင်သန်ကြရတတ်သည်။
မမြင်အပ်သော နာမ်လောကပိုင်းမှ မယ်တော်ကြီး တစ်ပါးပါး၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကောင်းမြတ်အောင် ပြုမူနေထိုင်ပေးပါက သူမတူအောင် အောင်မြင်ကြီးပွားတတ်ကြလေသည်လွတ်လပ်မှုကို အလွန် မြတ်နိုး၏။ စွန့်စားရသော အလုပ်များကို အထူးနှစ်သက်၏။ ခရီးသွားလာနေရသည်ကို သဘောကျ၏။ ဗဟုသုတရှာဖွေလိုက်စားလို၏။ ဗေဒင်လက္ခဏာစသောလောကီပညာများကို ယုံကြည်လက်ခံ၍ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို၏။
ယုံကြည်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားကြသည်။ သူတစ်ပါး၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အလွန်မုန်းသည်။ စွမ်းဆောင်ချက်နှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ပြည့်ဝသော်လည်း ခေါင်းမာခြင်း၊ ကြာရှည်စွာစောင့်စားရသည်ကို သည်းမခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အောင်မြင်ခါနီးမှလက်လွတ်သွားရသော အခြေအနေမျိုး မကြာခဏကြုံရတတ်သည်ထိုမျှသာမက မိမိအရွယ်ရောက်ချိန်တွင် မိဘများစီးပွားကျဆင်းသွားချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်သွားမှုမျိုး၊ မောင်နှမသားချင်းတို့၏ဒဏ်ကိုခံရခြင်းတို့ပါ ကြုံရတတ်သဖြင့် စီးပွားရေးတွင် စိတ်ရှည်စွာ ကြိုးစားပေးမှ အောင်မြင်တတ်သည်။
အတိုက်အခံများနှင့် ကြုံသောအခါ မိုက်ရူးရဲတဇွတ်ထိုး လုပ်သဖြင့် နစ်နာတတ်သည်။ အလုပ်မကြာခဏပြောင်းလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ပြီး တစ်ခုတည်း စွဲမြဲစွာလုပ်သွားပါက အထူးအောင်မြင်သူများဖြစ်၏။ ဘာသာရေးဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီးလုပ်ပါအထူးအောင်မြင်တတ်သည် စစ်ဘက်၊ စက်မှု၊ ဆေးပညာ၊ သတင်းထောက်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အချက်အပြုတ်တို့တွင် အထူးကောင်းကျိုးပေး၏။
အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး နှလုံးသားရေးတွင် စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ့်ချစ်သူနှင့် နားလည်မှုလွဲမှား သဖြင့် မကြာခဏချစ်သောက ဝေဒနာတို့ကျိတ်ပြီး ခံစားရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် ကိုယ်တိုင်က စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့် အယုအယ အကြင်နာခံလိုတတ်ငြားကိုယ်တိုင်က အေးတိအေးစက်နေတတ်သဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။
ထို့အပြင် ကိုယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုး ဆုံးဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်မကောင်းတစ်ယောက်ပြောင်း ဟူသော စိတ်ဓါတ်ကြောင့်မှားယွင်းတတ်သည်။ အချစ်ဦး၏ ပြစ်သွားခြင်းခံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်သောအခါ တွင် နှလုံးသားမှာဆန္ဒထက် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်သားအပေါ်တွင် သနားစိတ်၊ သနားချစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပါက ပို၍စိတ်ချမ်းသာကြရတတ်သည်။
ရုပ်ရည်တင့်တယ်တတ်ရုံသာမက ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော မျက်ဝန်း၊ စူးရှတောက်ပသော မျက်ဝန်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြသည်။ အသားထက် အသီးအရွက်ကိုပို ကြိုက်၏။ ကျန်းမာရေအတွက် ကြက်သွန်နီ၊ ချင်း၊ ငရုတ်ကောင်းတိုပကို ဓါတ်စာအဖြစ် မကြာခဏ စားသုံးသင့်ပါသည်။ သတိထားရမည့် ဘေးအန္တရယ်များမှာ မီးဘေးသတိထားရမည်။ လျှပ်စစ်မီး ရှောစ့်ဖြစ်တတ်သည်။ စက်ကရိယာတို့ ထိခိုက်တတ်သည်။
လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် ပေါက်ကွဲမှုကို သတိပြုရမည်။ သို့သော် ယေဘုယျမျှသာဖြစ်ပြီး သတိထားသွားလာဆောင်ရွက်က ဥပဒ်ကင်းမည်။ ဦးခေါင်းနှင့်ခြေထောက် တို့တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ အရက်သေစာသောက်စားသူများမှာ ထိုဥပဒ်အန္တရယ်မျိုးအဖြစ်များပြီး မိန်းမအဖျက်ပါ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ကို အတိုက်အခံလုပ်ချင်လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရက်သေစာကို ပိုဆင်ခြင်သင့်လေသည်။
တန်ခူးလမွေးဖွားသူများသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို သဘောကျသော်လည်းကိုယ်တိုင်ကမူ ခြေမြန်လက်မြန်၊ အပြောမြန်သည့် တဇွတ်ထိုးစိတ်တို့ကြောင့် သူများအမြင်တွင် ရိုင်းစိုင်းနေတတ်သည်။ သို့သော် သဘာဝကျသော အပြင်အဆင်ကို နှစ်သက်ပြီး ခေတ်ပေါ်ဒီဇိုင်း အ၀တ်အစားတို့ကို နှစ်သက်တတ်သည်။ လူစုလူဝေးတွင် ဟေးလားဝါးလား မနေတတ်။ သွက်လက်သပ်ရပ်စွာ ၀တ်စားတတ်ကြသည်။ အရောင်အားဖြင့် ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်တို့ကို သုံးစွဲသင့်သည်။ အနက်ရောင်ကို အထူးရှောင်သင့်ပါသည်။
ပတ္တမြားနှင့်စိန်ကို အထူးဝတ်ဆင်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် ပတ္တမြားလက်စွပ်ကို လကျာင်္ဘက်လက်ခလယ် တွင် ၀တ်ဆင်သင့်ပေသည်။
ကဆုနျလ မှေးဖှားသူမြား အတှကျ တဈသကျတာ ဟောကိနျးမြား
ကဆုနျလ မှေးဖှားသူမြားသညျပငျကိုယျစရိုကျအားဖွငျ့ တညျကွညျအေးဆေးသူမြားဖွဈသညျ။ဖွောငျ့မတျမယျအလှနျသစ်စာရှိတယျ၊ အလှနျသံယောဇဉျကွီးမားတတျကွတယျ ။ အနုပညာပါရမီဓါတျခံကွီးမယျ အလှနျ ညှို့ဓါတျအားကောငျးတယျ တဈခုမဟုတျ တဈခုဖွငျ့ လူအမြား၏ခဈြခငျကွညျညိုခွငျးကိုခံရတတျတယျ ။
ဘေးလူတှကေခဈြခငျမယျ စနျးပှငျ့မယျ အလှအပ၊ အသနျ့အပွနျ့ကွိုကျတတျတယျ၊ စိတျကူးယဉျတတျမယျ။အထူးသဖွငျ့ ဘ၀တှငျကွညျနူးလှမျးဆှတျဖှယျရာအနအေထားမြားကိုမြားစှာကွုံခဲ့တတျကွပါမညျ။ အလှမျးဓါတျခံရှိတယျလူပေါငျးဆနျ့မယျအကောငျးကွိုကျတတျတယျ ကောငျးပဆေို့သညျ့ အသုံးအဆောငျမြားကိုသာသုံးခငျြ၏တယျ ငှအေသုံးကွမျးမယျ။
ဘယျကိစ်စမဆို ဆနျးစဈလလေ့ာကာ ဆုံးဖွတျခကျြ ခိုငျခိုငျခပြွီးမှ စတငျလုပျကိုငျတတျတယျ။နူးညံ့သိမျမှသေ့လောကျ ဒေါသထှကျလာကာ ဘာမှ မမွငျတော့လောကျအောငျ ကမူးရှူးထိုးလုပျတတျတယျ။ ရဲရငျ့တညျကွညျ၍ ထကျမွကျမယျနံနကျစော အရုဏျဦးအခြိနျတှငျ အသိညာဏျအထူးပှငျ့တတျတယျ။
ထိုအခြိနျတှငျ စိတျကူးကောငျးတှေ ပျေါတတျတယျဆုံဖွတျစရာကိစ်စမြားဒီအခြိနျတှမှောလုပျပါကအမှားအယှငျးမရှိပဲအောငျမွငျမယျ။ ခံစားခကျြပွငျးထနျတတျတယျ ဘာမဆိုအလေးအနကျခံစားတတျတယျ၊ ကိစ်စတဈခုကို ဆုံးဖွတျပွီးကနောကျမတှနျ့တမျးလုပျတတျတဲ့ဥာဉျရှိတယျစညျးကမျးတကစြနဈတကလြုပျတတျတယျ ။
အခြိနျနာရီ၊ ကတိသစ်စာကိုအလှနျတနျဖိုးထားမယျ ဖွောငျ့မတျတယျ။
ကတိပကျြက စိတျဆိုးတတျတယျ။ စိတျဆိုးခဲသလောကျိစိတျဆိုးလာပါကလဲအသားတှတေဆတျဆတျတုနျလာကာမကျြရညျပငျကလြာတတျ၏။အထူးသဖွငျ့ မိမိအပျေါလိမျလညျလှညျ့ဖြားလာက လုံးဝခှငျ့မလှတျတတျ။သစ်စာမဲ့ခွငျးကို အလှနျရှံ့မုနျး၏။ စကားပွောဆိုရာတှငျ အေးတိအေးစကျနှငျ့ ခကျြကကြပြွောဆိုတတျတယျ။ စကားလုံးမြားဖွငျ့နာကငျြခံခကျဖွဈအောငျ ပွောဆိုနိုငျစှမျးတယျ။
တဈခါတဈရံ ပွောပေါကျဆိုပေါကျ ကပျကပျဖဲ့ဖဲ့နိုငျတယျ၊သို့သျော အပျေါယံအားဖွငျ့မာကြောသယောငျရှိသျောလညျး အတှငျးစိတျကနူးညံ့တယျ၊ ကိုယျ့အပျေါသိမျသိမျမှမှေ့ဆေ့ကျဆံလာပါက အရာရာကို ခှငျ့လှတျနိုငျတယျ။အမြားအတှကျအနဈနာခံတတျတယျ အမြားကောငျးကြိုးဆောငျရှကျလိုမယျလောဘမကွီးဘဲ လုပျစရာတှကေို ဇှဲဖွငျ့ တှနျးတိုကျလုပျတတျတယျ။
အရာရာအပျေါ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနှငျ့နထေိုငျလုပျကိုငျတတျတယျ။ရှုပျရှုပျယှကျယှကျဘာမှ မကွိုကျ၊ သူတဈပါးကိစ်စ ၀ငျမစှတျဖကျတတျ။ထို့အတူ ကိုယျ့နရောကို လာပတျသကျခွငျးမြိုးကိုလညျး မကွိုကျတတျပါ သို့သျော မိသားစု သံယောဇဉျကွီးမားကွတယျ၊ သှေးရငျးသားရငျး၊မိတျဆှရေငျးတှအေတှကျ အမွဲလိုလို ပေးဆပျနတေတျတယျ၊အနဈနာခံနရေတတျတယျ ။
တဈခါတဈရံဆငျခငျြကငျးစှာမာနျမာနနှငျ့ ပွုမူမိတတျတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အယုံလှနျပွီးတဇှတျထိုးလုပျမိတတျတယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို အထငျကွီးပွီးမိုကျရူးရဲလုပျမိတတျတယျ ၊ မညျသို့ပငျဖွဈစဝေီရိယကွီးမယျ တိုးတကျကွီးပှားရနျအမွဲကွံစညျနတေတျတယျ။လူခဈြလူခငျမြားမယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ရိုသစှောသနျ့သနျ့ခနျ့ခနျ့နတေတျခွငျးတို့ကွောငျ့ အမညျကြျောကွား အောငျမွငျခမျြးသာသူမြားဖွဈတတျပါသညျ။
ဘ၀ကို သူတဈပါးတို့ထကျပို၍တနျဖိုးထားသူမြားဖွဈမညျ ဇှဲကောငျးကောငျးနှငျ့ကွိုးစားတတျတယျ။အပငျပနျးခံ၍ကွိုးစားကွ၏ စီးပှားလာဘျမွငျပွီးငှရှောကောငျးတယျ၊ငှသေုံးကွမျးမယျ၊ မိတျကောငျးပေါမယျ၊လုပျငနျးမရှေး လုပျဆောငျတတျတယျ၊ဘ၀တှငျသူတဈပါးက နှိမျ၍ဆကျဆံခံရခွငျးကို မခံခငျြစိတျဖွငျ့ကွိုးစားတတျတယျ။ဘ၀တှငျထူးခွားစှာပွညျ့စုံကွှယျဝတတျပါသညျ။
ကတိသစ်စာတညျကွညျခွငျးကွောငျ့ လဲစီးပှားဖကျတို့၏ ယုံကွညျခွငျးကိုခံရတတျတယျ၊ဘ၀တှငျဒုတိယအရှယျနှငျ့တတိအရှယျတှငျစီးပှားပွညျ့စုံတတျ၏။ အကွံညာဏျကောငျးမြား ပျေါထှကျလာတတျသလိုလကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျေါမိ၍လဲကွီးပှားခမျြးသာတတျပါတယျ၊စီးပှားတကျခြိနျတှငျအပြျောအပါးဖကျမိတတျပါသညျ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးအလုပျကိုသာလုပျပါ
သူတဈပါးလကျအောကျခံမလုပျသငျ့ပါ။ ကိုယျ့စိတျကူးနှငျ့သာ ရဲရဲလုပျပါ။မညျသညျ့အလုပျမဆို စှဲစှဲမွဲမွဲလုပျပါ။အလုပျအမြိုးမြိုးပွောငျးလုပျခွငျးကိုရှောငျပါ။အထူးသဖွငျ့ စီးပှားရေးတှငျ အားနာခွငျး၊ အာမခံခွငျး၊ ဆှမြေိုးမြားနှငျ့ဆကျစပျလုပျကိုငျခွငျးတို့ကို အထူးရှောငျပါ။ စာပလေုပျငနျးဖွငျ့ အထူးကောငျးကြိုးပေး၏။အနုပညာလုပျငနျး၊ စာရေးဆရာ၊ နတ်ခတျဗဒေငျပညာရှငျ၊ဆေးဝါးလုပျငနျး၊ လြှပျစဈပစ်စညျး၊ စားသောကျကုနျလုပျငနျးမြားကိုလုပျကိုငျ၍ ကွီးပှားနိုငျ၏။
ထို့အပွငျ စဈဘကျ၊ သူနာပွု ပနျးအလှစိုကျပြိုးရောငျးခခြွငျးတို့ဖွငျ့ အကြိုးအထူးပေးမညျအထူးသဖွငျ့ အနုပညာလုပျငနျး၊အလှအပဆိုငျရာလုပျငနျးတို့ဖွငျ့ အထူးအောငျမွငျတတျပါသညျ။အခဈြရေး အိမျထောငျရေး နှလုံးသားခံစားမှုပွငျးထနျတယျ ကဗြာဆနျတယျအထူးသဖွငျ့ အလှမျးတေးသီခငျြး၊ ကဗြာစာပတေို့ကို နှဈသကျ၏။သံယောဇဉျကွီး၏။အထူးသဖွငျ့ အလှမျးသမားမြားဖွဈတယျ။
ဘ၀တှငျသံယောဇဉျကွီးမားသူတို့ကို ခှဲခှာပွီး လှမျးနတေတျကွရ၏။ပထမပိုငျးတှငျ ခဈြကံခပွေီး နောကျပိုငျးမှကောငျးတတျ၏။တဈရှာသူတဈနယျသားတို့နှငျ့ ခဈြကွိုးသှယျမိတတျ၏။ အရူးအမူးခဈြတတျကွ၏။တသသလှမျးဆှေးနတေတျကွရ၏။သို့သျောအိမျထောငျပွုပွီးသောအခြိနျတှငျ စိတျခမျြးသာကွရတတျပါသညျ။ဘ၀တှငျတစိမျ့စိမျ့ပွနျတှေးပွီး တသသ ကွညျနူးမဆုံး၊လှမျးမဆုံးအဖွဈအပကျြလေးမြားစှာ ကွုံကွရတတျသူမြားဖွဈပါတယျ။
အခဈြရေးတှငျ ကွားလူအနှောကျအယှကျ အမွဲကွုံရတတျ၏။ထို့အတူအိမျထောငျရေးတှငျလညျး သှေးဆောငျဖွားယောငျးခွငျးခံရတတျ၏။ ဒီလမှေးဖှားသူတို့သညျသစ်စာကွီးမားသူမြားဖွဈ၍ အိမျထောငျသာယာတတျပါသညျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျရုပျဆငျးတငျ့တယျ၍ သပျရပျခနျ့ငွားသူဖွဈသလို အသားလတျလတျနှငျ့လှပပွပွေဈသူနှငျ့ ဖူးစာဆုံရတတျပါတယျ မကျြနှာတှငျ ထငျရှားသောမှဲ့အမှတျအသားပါသူနှငျ့ ဖူးစာဆုံတတျတယျ။
အိမျထောငျဖကျအပျေါတှငျအစစ ကိုယျက အနဈနာခံ၍ အနှံတာခံ၍ ပေါငျးဖျောရတတျ၏။ အထူးသတိပေးလိုသညျမှာ ခဈြသူထားခြိနျတှငျလညျးကောငျး၊အိမျထောငျပွုခြိနျတှငျလညျးကောငျး၊ခေါငျးအေးအေးနှငျ့ စဉျးစားပွီးမှလကျခံဆုံးဖွတျပါ။အထူးသဖွငျ့ မိနျးကလေးမြားတဇှတျထိုးဆုံးဖွတျကာ အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျးဖွဈတတျသညျ။အထူးသတိထားပါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အစပိုငျးညံ့ပွီး နောကျပိုငျးတှငျကောငျးကြိုးခံစားရပါမညျ။
ကဆုနျလမှေးဖှားသူမြားသညျ စိတျထကျ၍ ဇှဲကောငျးသူမြားဖွဈပွီးလူအပငျပနျးခံနိုငျသျောလညျး ခန်ဓာကိုယျတှငျ မကွာခဏဝဒေနာဖွဈတတျ၏။ အဓိကအားဖွငျ့ အဆဈအမွဈမြားမကွာခဏနာကငျြကိုကျခဲတတျသညျ။ လထေိုး၊ လအေောငျ့၊၀မျးနာရောပါတို့လညျး မကွာခဏဖွဈတတျတယျ လညျခြောငျးနာ၊ အသံဝငျ၊ရငျကွပျရောဂါမြားမှာ အနညျးဆုံး တဈနှဈ တဈကွိမျမြှဖွဈတတျတယျ တျောရုံတနျရုံ ရောဂါလောကျဖွငျ့ဆရာဝနျပွခွငျး၊ ဆေးစားခွငျးမပွုဘဲ ဝဒေနာကိုကွိတျမှိတျခံစားနတေတျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ပငျ မလိုလားအပျဘဲရောဂါကွီးမားသှားတတျသညျ အမြိုးသမီးမြားသားအိမျအားနညျးတတျသညျ။ အမြိုးသားမြား ဆီးကြောကျတညျခွငျး၊ဆီးကြိတျရောငျခွငျးဖွဈတတျသညျ။ဘာမှမလုပျဘဲ ငွိမျနလြှေငျ ကနျြးမာရေးညံ့တတျ၏။ အငွိမျမနဘေဲ အလုပျမြားကို ဇယျဆကျသလို ဆကျတိုကျလုပျနကေ၊ လှုပျရှားနကေ ပိူ၍ကနျြးမာတတျသညျ။ အသေးအဖှဲဇကျကွောတကျ၊ ခေါငျးမူး၊ခေါငျးကိုကျရောဂါမြားဖွဈတတျတယျ။ အသီးအရှကျမြားမြားစားပေးပါ။
ကဆုနျလဖှား အမြိုးသမီးမြားသညျ ရငျသားတှငျ အနာဖွဈခွငျးမြိုးဖွဈတတျသဖွငျ့ ဂရုပွုသငျ့သညျ ။သတိပွုစရာ ဘေးဥပဒျအန်တရာယျမြားကတော့မကျြနှာတှငျ ရုတျတရကျထိခိုကျဒဏျရာရတတျသညျ။ တောငျပွိုခွငျး၊ မွပွေိုခွငျးစသောသဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား ရငျဆိုငျရတတျ၏။ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးလုပျသူမြားမှာ မတျောတဆထိခိုကျမှုမြားဖွဈတတျသညျ။
အထူးသဖွငျ့လကျနကျပေါကျကှဲခွငျး ဖွဈတတျ၍သတိပွုသငျ့သညျ။ သို့သျော အသကျအိုးအိမျထိခိုကျလောကျအောငျဘေးအန်တရာယျမရှိတတျပါ။ဒီလအတှငျးမှေးဖှားသူမြားဦးနှောကျသှေးကွောထိခိုကျခွငျး ရုတျတရကျဖွဈတတျသောကွောငျ့သတိထားသငျ့ပါ၏။ ထို့ပွငျ သူတဈပါးအတှကျ အနဈနာခံရသောဇာတာပါ၏ အဓိကဆငျခွငျ သတိပွုသငျ့ပါသညျ။ဘ၀တှငျ ဒုတိယအရှယျနှငျ့တတိယအရှယျတို့တှငျအထူးကောငျးစားတတျ၏။
အမှရေသလိုမြိုးရုတျတရကျကွီးပှားပွီး အောငျမွငျမှုရတတျ၏အကွီးအမှုးနရောကိုရတတျသညျ။ အလှူအတနျးမြားစှာပွုရတတျတယျကဆုနျလမှေးဖှားသူတို့သညျ သံယောဇဉျကွီး၍ အနဈနာခံရသောဘ၀ပိုငျရှငျမြားဖွဈတတျပါတယျ။ ပေးဆပျမှု၊ အနဈနာခံမှုနှောငျကွိုးတညျးခံရမှု၊ ဖိနှိပျခြုပျခယျြမှုတို့ကိုအမွဲခံရတတျပါတယျ။ဆှမြေိုးမြားနှငျ့ ဝေးဝေးနသေငျ့၏။ သီးသနျ့ခှဲထှကျသငျ့၏။
သို့သျောမညျသညျ့နရောတှငျ နသေညျဖွဈစေ ကိုယျကြိုးကိုမငဲ့ဘဲ စတေနာ အဓိကထား၍ လုပျဆောငျကသူမတူအောငျကွီးပှားတတျ၏။စှမျးအားထညျ့၍လုပျဆောငျက သူတဈပါးထကျ ထူးကဲစှာအောငျမွငျတတျ၏။ သို့သျော ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျစိတျနညျးကမယုံမရဲစိတျဖွငျ့ လုပျတတျသဖွငျ့ နဈနာတတျ၏။ ဒါ့ကွာငျ့သံယောဇဉျကွီးခွငျး၊ အလှနျအမငျး အနဈနာခံခွငျး၊မယုံမရဲလုပျခွငျးတို့ကိုရှောငျပါ။
စိတျမွနျခွငျး၊ စိတျကွီးခွငျး၊စကားပွောကွမျးခွငျးကိုရှောငျပါ။ ပငျကိုယျရုပျရညျ၊ပငျကိုယျဟနျအမူအရာအထူးကောငျးသလောကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျထငျရှားအောငျမနတေတျမ၀တျတတျ၊မလုပျတတျဘဲရှိနတေတျကွတယျ၊ထူးခွားသော ဆှဲဆောငျမှုရှိသူမြားဖွဈကွပါသညျ။ အေးဆေးတညျငွိမျစှာသှားလာနထေိုငျပါလကျဝတျရတနာတို့ကို ရှိတိုငျးမ၀တျသငျ့ပါ အကောငျးဆုံးအဆောငျမှာ(မွ) ကြောကျဖွဈပါသညျ။
ကဆုန်လ မွေးဖွားသူများသည်ပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့် တည်ကြည်အေးဆေးသူများဖြစ်သည်။ဖြောင့်မတ်မယ်အလွန်သစ္စာရှိတယ်၊ အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးမားတတ်ကြတယ် ။ အနုပညာပါရမီဓါတ်ခံကြီးမယ် အလွန် ညှို့ဓါတ်အားကောင်းတယ် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုဖြင့် လူအများ၏ချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကိုခံရတတ်တယ် ။
ဘေးလူတွေကချစ်ခင်မယ် စန်းပွင့်မယ် အလှအပ၊ အသန့်အပြန့်ကြိုက်တတ်တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တတ်မယ်။အထူးသဖြင့် ဘ၀တွင်ကြည်နူးလွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာအနေအထားများကိုများစွာကြုံခဲ့တတ်ကြပါမည်။ အလွမ်းဓါတ်ခံရှိတယ်လူပေါင်းဆန့်မယ်အကောင်းကြိုက်တတ်တယ် ကောင်းပေ့ဆိုသည့် အသုံးအဆောင်များကိုသာသုံးချင်၏တယ် ငွေအသုံးကြမ်းမယ်။
ဘယ်ကိစ္စမဆို ဆန်းစစ်လေ့လာကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်ချပြီးမှ စတင်လုပ်ကိုင်တတ်တယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့သလောက် ဒေါသထွက်လာကာ ဘာမှ မမြင်တော့လောက်အောင် ကမူးရှူးထိုးလုပ်တတ်တယ်။ ရဲရင့်တည်ကြည်၍ ထက်မြက်မယ်နံနက်စော အရုဏ်ဦးအချိန်တွင် အသိညာဏ်အထူးပွင့်တတ်တယ်။
ထိုအချိန်တွင် စိတ်ကူးကောင်းတွေ ပေါ်တတ်တယ်ဆုံဖြတ်စရာကိစ္စများဒီအချိန်တွေမှာလုပ်ပါကအမှားအယွင်းမရှိပဲအောင်မြင်မယ်။ ခံစားချက်ပြင်းထန်တတ်တယ် ဘာမဆိုအလေးအနက်ခံစားတတ်တယ်၊ ကိစ္စတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပြီးကနောက်မတွန့်တမ်းလုပ်တတ်တဲ့ဥာဉ်ရှိတယ်စည်းကမ်းတကျစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ် ။
အချိန်နာရီ၊ ကတိသစ္စာကိုအလွန်တန်ဖိုးထားမယ် ဖြောင့်မတ်တယ်။
ကတိပျက်က စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ စိတ်ဆိုးခဲသလောက်ိစိတ်ဆိုးလာပါကလဲအသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်လာကာမျက်ရည်ပင်ကျလာတတ်၏။အထူးသဖြင့် မိမိအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားလာက လုံးဝခွင့်မလွှတ်တတ်။သစ္စာမဲ့ခြင်းကို အလွန်ရွံ့မုန်း၏။ စကားပြောဆိုရာတွင် အေးတိအေးစက်နှင့် ချက်ကျကျပြောဆိုတတ်တယ်။ စကားလုံးများဖြင့်နာကျင်ခံခက်ဖြစ်အောင် ပြောဆိုနိုင်စွမ်းတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ပြောပေါက်ဆိုပေါက် ကပ်ကပ်ဖဲ့ဖဲ့နိုင်တယ်၊သို့သော် အပေါ်ယံအားဖြင့်မာကျောသယောင်ရှိသော်လည်း အတွင်းစိတ်ကနူးညံ့တယ်၊ ကိုယ့်အပေါ်သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ဆက်ဆံလာပါက အရာရာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။အများအတွက်အနစ်နာခံတတ်တယ် အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်လိုမယ်လောဘမကြီးဘဲ လုပ်စရာတွေကို ဇွဲဖြင့် တွန်းတိုက်လုပ်တတ်တယ်။
အရာရာအပေါ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်နေထိုင်လုပ်ကိုင်တတ်တယ်။ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်ဘာမှ မကြိုက်၊ သူတစ်ပါးကိစ္စ ၀င်မစွတ်ဖက်တတ်။ထို့အတူ ကိုယ့်နေရာကို လာပတ်သက်ခြင်းမျိုးကိုလည်း မကြိုက်တတ်ပါ သို့သော် မိသားစု သံယောဇဉ်ကြီးမားကြတယ်၊ သွေးရင်းသားရင်း၊မိတ်ဆွေရင်းတွေအတွက် အမြဲလိုလို ပေးဆပ်နေတတ်တယ်၊အနစ်နာခံနေရတတ်တယ် ။
တစ်ခါတစ်ရံဆင်ချင်ကင်းစွာမာန်မာနနှင့် ပြုမူမိတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အယုံလွန်ပြီးတဇွတ်ထိုးလုပ်မိတတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီးမိုက်ရူးရဲလုပ်မိတတ်တယ် ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၀ီရိယကြီးမယ် တိုးတက်ကြီးပွားရန်အမြဲကြံစည်နေတတ်တယ်။လူချစ်လူခင်များမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုသေစွာသန့်သန့်ခန့်ခန့်နေတတ်ခြင်းတို့ကြောင့် အမည်ကျော်ကြား အောင်မြင်ချမ်းသာသူများဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဘ၀ကို သူတစ်ပါးတို့ထက်ပို၍တန်ဖိုးထားသူများဖြစ်မည် ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ကြိုးစားတတ်တယ်။အပင်ပန်းခံ၍ကြိုးစားကြ၏ စီးပွားလာဘ်မြင်ပြီးငွေရှာကောင်းတယ်၊ငွေသုံးကြမ်းမယ်၊ မိတ်ကောင်းပေါမယ်၊လုပ်ငန်းမရွေး လုပ်ဆောင်တတ်တယ်၊ဘ၀တွင်သူတစ်ပါးက နှိမ်၍ဆက်ဆံခံရခြင်းကို မခံချင်စိတ်ဖြင့်ကြိုးစားတတ်တယ်။ဘ၀တွင်ထူးခြားစွာပြည့်စုံကြွယ်ဝတတ်ပါသည်။
ကတိသစ္စာတည်ကြည်ခြင်းကြောင့် လဲစီးပွားဖက်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်၊ဘ၀တွင်ဒုတိယအရွယ်နှင့်တတိအရွယ်တွင်စီးပွားပြည့်စုံတတ်၏။ အကြံညာဏ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာတတ်သလိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်မိ၍လဲကြီးပွားချမ်းသာတတ်ပါတယ်၊စီးပွားတက်ချိန်တွင်အပျော်အပါးဖက်မိတတ်ပါသည် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်ကိုသာလုပ်ပါ
သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံမလုပ်သင့်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကူးနှင့်သာ ရဲရဲလုပ်ပါ။မည်သည့်အလုပ်မဆို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ပါ။အလုပ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးတွင် အားနာခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ ဆွေမျိုးများနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို အထူးရှောင်ပါ။ စာပေလုပ်ငန်းဖြင့် အထူးကောင်းကျိုးပေး၏။အနုပညာလုပ်ငန်း၊ စာရေးဆရာ၊ နတ္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်၊ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်၍ ကြီးပွားနိုင်၏။
ထို့အပြင် စစ်ဘက်၊ သူနာပြု ပန်းအလှစိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့် အကျိုးအထူးပေးမည်အထူးသဖြင့် အနုပညာလုပ်ငန်း၊အလှအပဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အထူးအောင်မြင်တတ်ပါသည်။အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး နှလုံးသားခံစားမှုပြင်းထန်တယ် ကဗျာဆန်တယ်အထူးသဖြင့် အလွမ်းတေးသီချင်း၊ ကဗျာစာပေတို့ကို နှစ်သက်၏။သံယောဇဉ်ကြီး၏။အထူးသဖြင့် အလွမ်းသမားများဖြစ်တယ်။
ဘ၀တွင်သံယောဇဉ်ကြီးမားသူတို့ကို ခွဲခွာပြီး လွမ်းနေတတ်ကြရ၏။ပထမပိုင်းတွင် ချစ်ကံခေပြီး နောက်ပိုင်းမှကောင်းတတ်၏။တစ်ရွာသူတစ်နယ်သားတို့နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်မိတတ်၏။ အရူးအမူးချစ်တတ်ကြ၏။တသသလွမ်းဆွေးနေတတ်ကြရ၏။သို့သော်အိမ်ထောင်ပြုပြီးသောအချိန်တွင် စိတ်ချမ်းသာကြရတတ်ပါသည်။ဘ၀တွင်တစိမ့်စိမ့်ပြန်တွေးပြီး တသသ ကြည်နူးမဆုံး၊လွမ်းမဆုံးအဖြစ်အပျက်လေးများစွာ ကြုံကြရတတ်သူများဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ရေးတွင် ကြားလူအနှောက်အယှက် အမြဲကြုံရတတ်၏။ထို့အတူအိမ်ထောင်ရေးတွင်လည်း သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းခံရတတ်၏။ ဒီလမွေးဖွားသူတို့သည်သစ္စာကြီးမားသူများဖြစ်၍ အိမ်ထောင်သာယာတတ်ပါသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရုပ်ဆင်းတင့်တယ်၍ သပ်ရပ်ခန့်ငြားသူဖြစ်သလို အသားလတ်လတ်နှင့်လှပပြေပြစ်သူနှင့် ဖူးစာဆုံရတတ်ပါတယ် မျက်နှာတွင် ထင်ရှားသောမှဲ့အမှတ်အသားပါသူနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်တယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်တွင်အစစ ကိုယ်က အနစ်နာခံ၍ အနွံတာခံ၍ ပေါင်းဖော်ရတတ်၏။ အထူးသတိပေးလိုသည်မှာ ချစ်သူထားချိန်တွင်လည်းကောင်း၊အိမ်ထောင်ပြုချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားပြီးမှလက်ခံဆုံးဖြတ်ပါ။အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများတဇွတ်ထိုးဆုံးဖြတ်ကာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်တတ်သည်။အထူးသတိထားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစပိုင်းညံ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ကောင်းကျိုးခံစားရပါမည်။
ကဆုန်လမွေးဖွားသူများသည် စိတ်ထက်၍ ဇွဲကောင်းသူများဖြစ်ပြီးလူအပင်ပန်းခံနိုင်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင် မကြာခဏဝေဒနာဖြစ်တတ်၏။ အဓိကအားဖြင့် အဆစ်အမြစ်များမကြာခဏနာကျင်ကိုက်ခဲတတ်သည်။ လေထိုး၊ လေအောင့်၊၀မ်းနာရောပါတို့လည်း မကြာခဏဖြစ်တတ်တယ် လည်ချောင်းနာ၊ အသံဝင်၊ရင်ကြပ်ရောဂါများမှာ အနည်းဆုံး တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်မျှဖြစ်တတ်တယ် တော်ရုံတန်ရုံ ရောဂါလောက်ဖြင့်ဆရာဝန်ပြခြင်း၊ ဆေးစားခြင်းမပြုဘဲ ဝေဒနာကိုကြိတ်မှိတ်ခံစားနေတတ်သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် မလိုလားအပ်ဘဲရောဂါကြီးမားသွားတတ်သည် အမျိုးသမီးများသားအိမ်အားနည်းတတ်သည်။ အမျိုးသားများ ဆီးကျောက်တည်ခြင်း၊ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေလျှင် ကျန်းမာရေးညံ့တတ်၏။ အငြိမ်မနေဘဲ အလုပ်များကို ဇယ်ဆက်သလို ဆက်တိုက်လုပ်နေက၊ လှုပ်ရှားနေက ပိူ၍ကျန်းမာတတ်သည်။ အသေးအဖွဲဇက်ကြောတက်၊ ခေါင်းမူး၊ခေါင်းကိုက်ရောဂါများဖြစ်တတ်တယ်။ အသီးအရွက်များများစားပေးပါ။
ကဆုန်လဖွား အမျိုးသမီးများသည် ရင်သားတွင် အနာဖြစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်သဖြင့် ဂရုပြုသင့်သည် ။သတိပြုစရာ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်များကတော့မျက်နှာတွင် ရုတ်တရက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ တောင်ပြိုခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းစသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရင်ဆိုင်ရတတ်၏။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်သူများမှာ မတော်တဆထိခိုက်မှုများဖြစ်တတ်သည်။
အထူးသဖြင့်လက်နက်ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်တတ်၍သတိပြုသင့်သည်။ သို့သော် အသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်လောက်အောင်ဘေးအန္တရာယ်မရှိတတ်ပါ။ဒီလအတွင်းမွေးဖွားသူများဦးနှောက်သွေးကြောထိခိုက်ခြင်း ရုတ်တရက်ဖြစ်တတ်သောကြောင့်သတိထားသင့်ပါ၏။ ထို့ပြင် သူတစ်ပါးအတွက် အနစ်နာခံရသောဇာတာပါ၏ အဓိကဆင်ခြင် သတိပြုသင့်ပါသည်။ဘ၀တွင် ဒုတိယအရွယ်နှင့်တတိယအရွယ်တို့တွင်အထူးကောင်းစားတတ်၏။
အမွေရသလိုမျိုးရုတ်တရက်ကြီးပွားပြီး အောင်မြင်မှုရတတ်၏အကြီးအမှုးနေရာကိုရတတ်သည်။ အလှူအတန်းများစွာပြုရတတ်တယ်ကဆုန်လမွေးဖွားသူတို့သည် သံယောဇဉ်ကြီး၍ အနစ်နာခံရသောဘ၀ပိုင်ရှင်များဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပေးဆပ်မှု၊ အနစ်နာခံမှုနှောင်ကြိုးတည်းခံရမှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတို့ကိုအမြဲခံရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးများနှင့် ဝေးဝေးနေသင့်၏။ သီးသန့်ခွဲထွက်သင့်၏။
သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင် နေသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ကျိုးကိုမငဲ့ဘဲ စေတနာ အဓိကထား၍ လုပ်ဆောင်ကသူမတူအောင်ကြီးပွားတတ်၏။စွမ်းအားထည့်၍လုပ်ဆောင်က သူတစ်ပါးထက် ထူးကဲစွာအောင်မြင်တတ်၏။ သို့သော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်နည်းကမယုံမရဲစိတ်ဖြင့် လုပ်တတ်သဖြင့် နစ်နာတတ်၏။ ဒါ့ကြာင့်သံယောဇဉ်ကြီးခြင်း၊ အလွန်အမင်း အနစ်နာခံခြင်း၊မယုံမရဲလုပ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ပါ။
စိတ်မြန်ခြင်း၊ စိတ်ကြီးခြင်း၊စကားပြောကြမ်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ပင်ကိုယ်ရုပ်ရည်၊ပင်ကိုယ်ဟန်အမူအရာအထူးကောင်းသလောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်ရှားအောင်မနေတတ်မ၀တ်တတ်၊မလုပ်တတ်ဘဲရှိနေတတ်ကြတယ်၊ထူးခြားသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသူများဖြစ်ကြပါသည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသွားလာနေထိုင်ပါလက်ဝတ်ရတနာတို့ကို ရှိတိုင်းမ၀တ်သင့်ပါ အကောင်းဆုံးအဆောင်မှာ(မြ) ကျောက်ဖြစ်ပါသည်။
နယုနျလတှငျမှေးဖှားသူမြား အတှကျ တဈသကျတာ ဟောကိနျးမြား
နယုနျလတှငျမှေးဖှားသူမြားသညျ ဘာမဆိုစိတျဝငျစားတတျ၏။ မိတျဖှဲ့ကောငျး၏အပေါငျးအသငျးအလှနျမကျမညျ။ အပေါငျးအဖျောနှငျ့နရေမှပြျောတတျတယျ။စိတျထိခိုကျလှယျပွီးလိုခငျြတာအငမျးမရဖွဈတတျတယျ။တဇှတျထိုးလုပျတတျတယျ၊ စိတျနှဈခှရှိမယျ၊ဘယျကိစ်စမဆို စိတျဒှိဟနှငျ့ဆုံးဖွတျရခကျနတေတျတယျ။သို့သျော အသိဥာဏျထကျမွကျကွမယျ။
ယောကျြားပီသသော စိတျဓါတျရှိမယျ။ အမြိုးသမီးမြားမှာလညျး ထကျမွကျကွမယျ။ယောကြာင်ျးဆနျမယျ။ မလိမျတတျ မညာတတျ။ ဘယျအခကျအခဲမြိုးကိုမှ နောကျမဆုတျတတျ။လှတျလပျမှုကိုမွတျနိုးတယျ။ စညျးကမျးဘောငျတို့ကိုလုံးဝမကွိုကျအထုးလှတျလပျလိုစိတျရှိမယျ။ ငှကေိုပွငျးထနျစှာရှာတတျတယျ။ လောငျးကစားဘကျရောကျသှားတတျတယျ။
သူဋ်ဌေးဖွဈ ခှေးဖွဈကွံတတျ၏။ သုံးစရာရှိကသုံးပဈတတျ၏။ ကုနျသှားကလညျး မနှမွောတတျ။ ရှတေဈနငှေ့တေဈနဖွေ့ဈနမေယျ ။ လောဘကွီးတတျတယျ။အတှေးအချေါဥာဏျထကျသလောကျ အစှနျးရောကျတတျတယျ။အပွုသမားဖွဈလြှငျလညျး သူမြားထကျပို၍ထူးခွားစှာအမြားကောငျးကြိုးဆောငျရှကျတတျတယျ။ အပွုသမားမဖွဈက အဖကျြသမားကွီးဖွဈတတျမယျ။
လောငျးကစားမှုကို အထုံဝါသနာ အစှဲကွီးစှာ ပါလာတတျပွီးတဈခြီကောငျးပှပေါကျကွံတတျတယျ။ဆငျခွငျကရှောငျနိုငျမယျ။ သဈလှငျတောကျပမှု၊ သနျ့ရှငျးသနျ့ရပျမှုကို နှဈသကျမယျ သူတဈပါးအပျေါ အယုံအကွညျနညျးပါးပွီး။ အမွဲတမျး စရိုကျနှဈမြိုးဖွဈနတေတျမညျ။ဘာသာရေးတှငျ ပါရမီထူးတတျပွီး အနာဂတျကို ကွိုတငျဟောကိနျးထုတျနိုငျစှမျးသော ပါရမီထူးရှိမယျ။ စိတျမွနျ၊ ကိုယျမွနျရှိတယျ။
သူတဈပါးမတှေးသောရှုထောငျ့မှ ထူးခွားထကျမွကျစှာ တှေးတတျပွီး ခကျြခငျြးထလုပျတတျတယျ။ အပျေါယံသိမျမှသေ့လောကျ အတှငျးစိတျမာကွောခိုငျခနျ့မာတတျတယျ။ မဟုတျမခံမာနကွီးမယျ သူတဈပါးတို့အတှကျ ပွဿ နာ အခကျအခဲမြားရငျဆိုငျရခွငျးမြိုး မကွာခဏ ကွုံတတျတယျ။ စိတျမွနျကိုယျမွနျလုပျခွငျးကို အမွဲရှောငျပါ။နယုနျလမှေးဖှားသူတို့သညျ အဖျောအပေါငျးကိုနှဈသကျသျောငွားသူတဈပါးတို့အပျေါတှငျသံသယစိတျ၊ မယုံကွညျသောစိတျကွောငျ့တဈကိုယျတညျးအထီးကနျြစှာနရေတတျတယျ ။
အလုပျတဈခု မပွီးစီးမီနောကျထပျတဈခုကိုပွောငျ့လုပျတတျတယျ။သူတဈပါးအပျေါ အလှယျတကူ မယုံတတျသျောလညျး ယုံမိပွီဆိုကထိုသူပွောသမြှ အမှားကိုပငျ အမှနျထငျကာ ယုံတတျတယျ။ ကိစ်စတဈခုဖွဈလာကအနီးကပျလူပွောသမြှ ယုံမိတတျတယျ။ဘ၀တှငျ ကိုယျကြိုးသကျသကျ မကွညျ့၊ စိတျလိုကျမာနျပါထငျရာစိုငျးတတျခွငျး၊ အမြားအတှကျ ဆောငျရှကျနိုငျခွငျးတို့သညျသူမြားထကျပိုထူးတတျတယျ ။အခဈြရေးအိမျထောငျရေး အလှအပမကျမအပြျောအပါးမကျ၏။
အခဈြရေးတှငျ အရူးအမူးခဈြတတျကွ၏။ အပွောငျးအလဲမွနျတတျကွ၏။ အခဈြရေးတှငျ လိမ်မာပါးနပျစှာဖွငျ့အခဈြဇာတျလမျးမြား ဖနျတီးတတျကွ၏။ ထို့ကွောငျ့ အခဈြရေးအိမျထောငျရေးသာယာပွီးမှမထငျမှတျဘဲကှဲတတျကွရတတျပါတယျ။အမြားစုသညျတကယျခဈြမိကဘာမှ မမွငျလောငျအောငျ ခဈြတတျကွမယျ။ အနုပညာဝါသနာကွီးပွီးဘ၀ကို စိတျကူးယဉျဆနျစှာ လှုပျရှားတတျတယျ။
နယုနျလမှေးဖှားသူမြားသညျပတျဝနျးကငျြကို ဆှဲဆောငျနိုငျဖို့ အမွဲကွိုးစားနတေတျကွ၏။ထုံးတမျးစဉျလာတို့ကိုသိပျလကျမခံကွ။ လှပျလပျစှာ၊ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျလိုကွမညျ ခတျေမီသော အတှေးအချေါတို့နှငျ့ ခတျေမီစှာကငျြ့သုံးတတျတယျ။ခဈြလိုကျ မုနျးလိုကျနှငျ့ နားလညျရအလှနျခကျ၏။စကားတတျပွီး လြှို့ဝှကျသိပျသညျးစှာ ပွောဆိုတတျ၏။ တဈခါတဈရံ အုံ့ပုနျးခဈြနှငျ့ ခဈြနတေတျတယျ အမြိုးသားကော၊ အမြိုးသမီးမြားပါ အိမျထောငျပွုပွီးမှ ခွငွေိမျတတျ၏။
ထူးခွားခကျြမှာ ဘ၀အစကတညျးက အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အထီးကနျြဆနျသော ခံစားမှုရှိနခေဲ့တတျကွ၏။ သို့သျော ဘ၀အစကတညျးက ပွညျ့စုံမှု၊ကွှယျဝမှုတို့ ဖွဈနတေတျကွ၏။ ဘ၀တူလူတနျးစားထဲတှငျပွညျ့စုံသူမြားဖွဈတတျကွ၏ဥာဏျထကျခွငျး၊ ဇှဲကောငျးခွငျးတို့နှငျ့အတူ သာမနျသူတို့ထကျပို၍ စှမျးရညျပွညျ့ဝနတေတျ၏။ သူတဈပါးတို့ထကျနှဈဆပို၍စှမျးဆောငျနိုငျကွ၏။
စိတျဒှိဟဖွဈခွငျး၊ အလုပျအမြိုးမြိုးပွောငျးလုပျခွငျး၊ အလုပျနှဈခု ပွိုငျတူလုပျခွငျးဆငျခွငျပါသူတဈပါးအပျေါ သံသယကွီးသလောကျ ယုံမိလြှငျပုံအပျခွငျးရှောငျသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျ အောငျမွငျမညျ။ လူမြိုးခွားတို့နှငျ့ဆကျစပျပွီးအောငျမွငျတတျ၏။ ဘ၀တှငျ ခကျခဲစှာ ရုနျးကနျယူရမညျဟူသော လှဲမှားသညျ့ အတှေးမြားကို ဖယျထားပါ။ လှတျလပျပေါ့ပါးစှာယုံကွညျစိတျဖွငျ့လုပျရငျး လှယျကူစှာအောငျမွငျတတျပါတယျ။
လကျလှယျခွငျးလကျဖှာခွငျးရှောငျပါ။ လောငျးကစားနှငျ့ဖွတျလမျးစီးပှားမှနျသမြှရှောငျပါ။ အလုပျနှဈခု တှဲလုပျရမညျ။ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ရှေးခယျြပွီးမှလုပျပါ။ ငှရှော၍လှယျမညျ။ဖကျစပျလုပျငနျးကောငျးကြိုးပေးမညျ။ လုပျငနျးတဈခု မပွီးပွတျမီအခွားလုပျငနျးတဈခုလုပျရနျ အခွအေနမြေိုး မကွာခဏကွုံမညျ။သတိပွုပါ။ ဘ၀တှငျ အတကျအကမြားစှာ ကွုံတတျ၏။
ကုမ်ပဏီအလုပျ၊မနျနဂြောအလုပျ၊ ဖကျစပျလုပျငနျးအ၀တျအထညျလုပျငနျး၊တေးသံသှငျးဆိုငျ၊ အနုပညာလုပျငနျးမြား၊ စာပေ၊ ဂြာနယျ၊သတငျးထောကျအလုပျမြား အထူးကောငျးကြိုးပေးတတျ၏။ အထူးမှာ အတတျပညာတဈခု ထူးခြှနျကာ နိုငျငံခွားအထိရောကျရှိတိုးတကျသှားတတျ၏။ ဘာမဆိုပွတျသားစှာရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။လိုကျနာသငျ့သောသူ၏ အကွံဥာဏျကို မာနကငျးစှာ အကွံယူလိုကျနာသငျ့၏။
မနာလိုမှု၊ ဝဖေနျမှုမြား အမွဲသညျးခံပါ။ခေါငျးမမာပဲ တညျကွညျစှာကွိုးစားပါ။ အထူးအောငျမွငျသှားပါမယျ။ဝါသနာပါ၍ ဆေးပညာလိုကျစားခဲ့ပါက မကျြစိ၊ နား၊ နှာခေါငျး၊ လညျခြောငျးရောဂါ၊ ခှဲစိပျပါရဂူကွီးမြားဖွဈတတျပါတယျ။ စာရေးဆရာဘကျတှငျအခဈြရသစာပဖွေငျ့ အထူးအောငျမွငျနိုငျတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစမေညျသညျ့လုပျငနျးပဲ လုပျလုပျ လှယျကူစှာဖွငျ့စီးပှားဖွဈထှနျးသူမြားသာဖွဈတတျပါတယျ။ငှကေံပှငျ့သူမြားဟု ဆိုရမညျ။
ကနျြးမာရေးအနအေထားမြားကအထူးသတိပွုသငျ့သညျမှာ ဘာရောဂါမှမဖွဈသေးဘဲအထူးစိုးရိမျနတေတျခွငျးပငျဖွဈ၏။ သို့သျော တဈခါတဈရံတှငျထငျသလိုပွုမူနထေိုငျခွငျးအပြျောအပါးလောငျးကစားဘကျတှငျမြားခွငျးတို့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျတတျတယျ။အထူးသဖွငျ့ အတှေးလှနျသဖွငျ့ အိပျမပြျောသောရောဂါ ရတတျ၏။၀မျးဗိုကျနှငျ့ အူလမျးကွောငျးတှငျ ရောဂါရတတျ၏။ သှေးလုံးလလေုံးရောဂါ ရတတျ၏။ လညျပငျးအကြိတျရောဂါနှငျ့ဦးနှောကျအာရုကွောရောံဂါတို့ဖွဈတတျ၏။
သို့သျောနယုနျလမှေးဖှားသူတို့သညျ ရောဂါကွီးကွီးမားမား ဖွဈခဲပါသညျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျအသကျရူလကေ့ငျြ့ခနျး(အာနာပါနကို အမွဲတမျး ပွုလုပျနထေိုငျပါ။နယုနျလမှေးဖှားသူတို့သညျ အမြားအားဖွငျ့ စိတျအတကျအကမြွနျမယျတဈခြီကောငျး ပှပေါကျကွံတတျသညျ။ ယုံကွညျရာ စှတျလုပျတတျ၏။ထို့ကွောငျ့ဘ၀သညျလညျး အတကျအကမြွနျ၏။ ရှတေဈနငှေ့တေဈနဖွေ့ဈနတေတျပါသညျအိမျထောငျရေးတှငျလညျး သာယာနပွေီးမှ ရုတျတရကျ ပွိုကှဲသှားတတျ၏။
အပွောငျးအလဲမွနျပွီးဆနျးသဈမှုကို လိုလားမညျ။ ခေါငျးမာစှာတဇှတျထိုးလုပျတတျတယျ သူတဈပါးအတှကျလညျး စှနျ့လှတျရဲတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး စှနျ့လှတျရဲ၏။ ကွိုကျသညျဖွဈစေ မကွိုကျသညျဖွဈစမှေနျရာကိုပွောတတျ၊ လုပျတတျလှနျးသဖွငျ့ အကြိုးစီးပှား ထိခိုကျတတျ၏။ ငှကွေေးအထူးကံကောငျးတတျတယျ မထငျမှတျသော အမှအေနှဈ၊ ထီပေါကျစသော ပှပေါကျမြားကွုံပွီး ထိပျသို့ရောကျသှားတတျ၏။ အသငျးအဖှဲ့၊ ကုမ်ပဏီတို့တှငျနရောကောငျးရသှားပွီးကွီးပှားသှားတတျတယျ ။မိဘဆှမြေိုး အထောကျအပံ့ရမှုနညျးတတျပွီး ကိုယျထူးကိုယျခြှနျရပျတညျအောငျမွငျတတျကွသညျ။
ဆှမြေိုးမြားထကျသူတစိမျး၊ လူမြိုးခွားကောငျးကြိုးခံစားရပွီး ကွီးပှားတတျ၏။ဘ၀တှငျ သူတဈပါးတို့၏ မနာလိုမှု၊ ဝဖေနျမှု၊တိုကျခိုကျမှုတို့ကို မကွာခဏခံရတတျတယျခြီးမှမျးမှုထကျ
ကဲ့ရဲ့မှုပွုလိုသူမြားသာမကွာခဏခံရမညျ။ နယုနျလမှေးဖှားသူတို့သညျအပေါငျးအဖျောမကျမောသျောလညျး အခွအေနအေရ တဈယောကျတညျးနရေသော အခါမြိုးတှငျလညျး ပငျပနျးစှာ ရုနျးကနျ၍ တိုကျခိုကျပွောဆို၍ ရငျဆိုငျမညျဆိုသောရနျလိုစိတျပယျပါ။အေးအေးဆေးဆေးပဲဟု သဘောထား၍လုပျပါမယုံသင်ျကာစိတျ၊ စိတျအားငယျစိတျတို့ကို ပယျပါ။ ဘယျကိစ်စမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နှငျ့အေးဆေးတညျငွိမျစှာ ပွောဆိုဖွရှေငျးပါ။
လုပျကိုငျပွုမူပါ။အထူးသဖွငျ့ အဖွူရောငျ၊ ငှရေောငျ၊ အဝါနုရောငျ၊ဆငျစှယျရောငျတို့ကို အထူးဆောငျပါ။ အနကျ၊ အညို ရှောငျပါ။ စိနျကိုပလကျတီနနှငျ့ကှငျးပွီး လကျစှပျဝတျပါ။ အမြိုးသမီး၊အမြိုးသားအားလုံး ပလကျတီနမျနှငျ့ဖွဈစေ၊ ရှနှေငျ့ဖွဈစေ စိနျကိုလကျစှပျကှငျးပွီး လကျခလယျတှငျ ၀တျဆငျထားပါ။အမြိုးသားမြားကွောငျကြောကျကို ရှနှေငျ့ကှငျးပွီး လကျညှိုးတှငျ ၀တျဆငျထားပါ။နှငျးဆီပနျးကို အထူးဆောငျနိုငျ၏။ နှငျးဆီပနျးအဝါ၊ အဖွူလာဘျကောငျးပါမညျ။
နယုန်လတွင်မွေးဖွားသူများသည် ဘာမဆိုစိတ်ဝင်စားတတ်၏။ မိတ်ဖွဲ့ကောင်း၏အပေါင်းအသင်းအလွန်မက်မည်။ အပေါင်းအဖော်နှင့်နေရမှပျော်တတ်တယ်။စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီးလိုချင်တာအငမ်းမရဖြစ်တတ်တယ်။တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ်၊ စိတ်နှစ်ခွရှိမယ်၊ဘယ်ကိစ္စမဆို စိတ်ဒွိဟနှင့်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတတ်တယ်။သို့သော် အသိဥာဏ်ထက်မြက်ကြမယ်။
ယောက်ျားပီသသော စိတ်ဓါတ်ရှိမယ်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ထက်မြက်ကြမယ်။ယောကျာင်္းဆန်မယ်။ မလိမ်တတ် မညာတတ်။ ဘယ်အခက်အခဲမျိုးကိုမှ နောက်မဆုတ်တတ်။လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးတယ်။ စည်းကမ်းဘောင်တို့ကိုလုံးဝမကြိုက်အထုးလွတ်လပ်လိုစိတ်ရှိမယ်။ ငွေကိုပြင်းထန်စွာရှာတတ်တယ်။ လောင်းကစားဘက်ရောက်သွားတတ်တယ်။
သူဋ္ဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ်ကြံတတ်၏။ သုံးစရာရှိကသုံးပစ်တတ်၏။ ကုန်သွားကလည်း မနှမြောတတ်။ ရွှေတစ်နေ့ငွေတစ်နေ့ဖြစ်နေမယ် ။ လောဘကြီးတတ်တယ်။အတွေးအခေါ်ဥာဏ်ထက်သလောက် အစွန်းရောက်တတ်တယ်။အပြုသမားဖြစ်လျှင်လည်း သူများထက်ပို၍ထူးခြားစွာအများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တတ်တယ်။ အပြုသမားမဖြစ်က အဖျက်သမားကြီးဖြစ်တတ်မယ်။
လောင်းကစားမှုကို အထုံဝါသနာ အစွဲကြီးစွာ ပါလာတတ်ပြီးတစ်ချီကောင်းပွပေါက်ကြံတတ်တယ်။ဆင်ခြင်ကရှောင်နိုင်မယ်။ သစ်လွင်တောက်ပမှု၊ သန့်ရှင်းသန့်ရပ်မှုကို နှစ်သက်မယ် သူတစ်ပါးအပေါ် အယုံအကြည်နည်းပါးပြီး။ အမြဲတမ်း စရိုက်နှစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်မည်။ဘာသာရေးတွင် ပါရမီထူးတတ်ပြီး အနာဂတ်ကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်စွမ်းသော ပါရမီထူးရှိမယ်။ စိတ်မြန်၊ ကိုယ်မြန်ရှိတယ်။
သူတစ်ပါးမတွေးသောရှုထောင့်မှ ထူးခြားထက်မြက်စွာ တွေးတတ်ပြီး ချက်ချင်းထလုပ်တတ်တယ်။ အပေါ်ယံသိမ်မွေ့သလောက် အတွင်းစိတ်မာကြောခိုင်ခန့်မာတတ်တယ်။ မဟုတ်မခံမာနကြီးမယ် သူတစ်ပါးတို့အတွက် ပြဿ နာ အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရခြင်းမျိုး မကြာခဏ ကြုံတတ်တယ်။ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်လုပ်ခြင်းကို အမြဲရှောင်ပါ။နယုန်လမွေးဖွားသူတို့သည် အဖော်အပေါင်းကိုနှစ်သက်သော်ငြားသူတစ်ပါးတို့အပေါ်တွင်သံသယစိတ်၊ မယုံကြည်သောစိတ်ကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်စွာနေရတတ်တယ် ။
အလုပ်တစ်ခု မပြီးစီးမီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောင့်လုပ်တတ်တယ်။သူတစ်ပါးအပေါ် အလွယ်တကူ မယုံတတ်သော်လည်း ယုံမိပြီဆိုကထိုသူပြောသမျှ အမှားကိုပင် အမှန်ထင်ကာ ယုံတတ်တယ်။ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာကအနီးကပ်လူပြောသမျှ ယုံမိတတ်တယ်။ဘ၀တွင် ကိုယ်ကျိုးသက်သက် မကြည့်၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါထင်ရာစိုင်းတတ်ခြင်း၊ အများအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့သည်သူများထက်ပိုထူးတတ်တယ် ။အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အလှအပမက်မအပျော်အပါးမက်၏။
အချစ်ရေးတွင် အရူးအမူးချစ်တတ်ကြ၏။ အပြောင်းအလဲမြန်တတ်ကြ၏။ အချစ်ရေးတွင် လိမ္မာပါးနပ်စွာဖြင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ ဖန်တီးတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးသာယာပြီးမှမထင်မှတ်ဘဲကွဲတတ်ကြရတတ်ပါတယ်။အများစုသည်တကယ်ချစ်မိကဘာမှ မမြင်လောင်အောင် ချစ်တတ်ကြမယ်။ အနုပညာဝါသနာကြီးပြီးဘ၀ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာ လှုပ်ရှားတတ်တယ်။
နယုန်လမွေးဖွားသူများသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတတ်ကြ၏။ထုံးတမ်းစဉ်လာတို့ကိုသိပ်လက်မခံကြ။ လွပ်လပ်စွာ၊ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လိုကြမည် ခေတ်မီသော အတွေးအခေါ်တို့နှင့် ခေတ်မီစွာကျင့်သုံးတတ်တယ်။ချစ်လိုက် မုန်းလိုက်နှင့် နားလည်ရအလွန်ခက်၏။စကားတတ်ပြီး လျှို့ဝှက်သိပ်သည်းစွာ ပြောဆိုတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အုံ့ပုန်းချစ်နှင့် ချစ်နေတတ်တယ် အမျိုးသားကော၊ အမျိုးသမီးများပါ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ခြေငြိမ်တတ်၏။
ထူးခြားချက်မှာ ဘ၀အစကတည်းက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အထီးကျန်ဆန်သော ခံစားမှုရှိနေခဲ့တတ်ကြ၏။ သို့သော် ဘ၀အစကတည်းက ပြည့်စုံမှု၊ကြွယ်ဝမှုတို့ ဖြစ်နေတတ်ကြ၏။ ဘ၀တူလူတန်းစားထဲတွင်ပြည့်စုံသူများဖြစ်တတ်ကြ၏ဥာဏ်ထက်ခြင်း၊ ဇွဲကောင်းခြင်းတို့နှင့်အတူ သာမန်သူတို့ထက်ပို၍ စွမ်းရည်ပြည့်ဝနေတတ်၏။ သူတစ်ပါးတို့ထက်နှစ်ဆပို၍စွမ်းဆောင်နိုင်ကြ၏။
စိတ်ဒွိဟဖြစ်ခြင်း၊ အလုပ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်နှစ်ခု ပြိုင်တူလုပ်ခြင်းဆင်ခြင်ပါသူတစ်ပါးအပေါ် သံသယကြီးသလောက် ယုံမိလျှင်ပုံအပ်ခြင်းရှောင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် အောင်မြင်မည်။ လူမျိုးခြားတို့နှင့်ဆက်စပ်ပြီးအောင်မြင်တတ်၏။ ဘ၀တွင် ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ယူရမည်ဟူသော လွဲမှားသည့် အတွေးများကို ဖယ်ထားပါ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာယုံကြည်စိတ်ဖြင့်လုပ်ရင်း လွယ်ကူစွာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
လက်လွယ်ခြင်းလက်ဖွာခြင်းရှောင်ပါ။ လောင်းကစားနှင့်ဖြတ်လမ်းစီးပွားမှန်သမျှရှောင်ပါ။ အလုပ်နှစ်ခု တွဲလုပ်ရမည်။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရွေးချယ်ပြီးမှလုပ်ပါ။ ငွေရှာ၍လွယ်မည်။ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကောင်းကျိုးပေးမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု မပြီးပြတ်မီအခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန် အခြေအနေမျိုး မကြာခဏကြုံမည်။သတိပြုပါ။ ဘ၀တွင် အတက်အကျများစွာ ကြုံတတ်၏။
ကုမ္ပဏီအလုပ်၊မန်နေဂျာအလုပ်၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအ၀တ်အထည်လုပ်ငန်း၊တေးသံသွင်းဆိုင်၊ အနုပညာလုပ်ငန်းများ၊ စာပေ၊ ဂျာနယ်၊သတင်းထောက်အလုပ်များ အထူးကောင်းကျိုးပေးတတ်၏။ အထူးမှာ အတတ်ပညာတစ်ခု ထူးချွှန်ကာ နိုင်ငံခြားအထိရောက်ရှိတိုးတက်သွားတတ်၏။ ဘာမဆိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။လိုက်နာသင့်သောသူ၏ အကြံဥာဏ်ကို မာနကင်းစွာ အကြံယူလိုက်နာသင့်၏။
မနာလိုမှု၊ ဝေဖန်မှုများ အမြဲသည်းခံပါ။ခေါင်းမမာပဲ တည်ကြည်စွာကြိုးစားပါ။ အထူးအောင်မြင်သွားပါမယ်။ဝါသနာပါ၍ ဆေးပညာလိုက်စားခဲ့ပါက မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းရောဂါ၊ ခွဲစိပ်ပါရဂူကြီးများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဘက်တွင်အချစ်ရသစာပေဖြင့် အထူးအောင်မြင်နိုင်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေမည်သည့်လုပ်ငန်းပဲ လုပ်လုပ် လွယ်ကူစွာဖြင့်စီးပွားဖြစ်ထွန်းသူများသာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကံပွင့်သူများဟု ဆိုရမည်။
ကျန်းမာရေးအနေအထားများကအထူးသတိပြုသင့်သည်မှာ ဘာရောဂါမှမဖြစ်သေးဘဲအထူးစိုးရိမ်နေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထင်သလိုပြုမူနေထိုင်ခြင်းအပျော်အပါးလောင်းကစားဘက်တွင်များခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့် အတွေးလွန်သဖြင့် အိပ်မပျော်သောရောဂါ ရတတ်၏။၀မ်းဗိုက်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါရတတ်၏။ သွေးလုံးလေလုံးရောဂါ ရတတ်၏။ လည်ပင်းအကျိတ်ရောဂါနှင့်ဦးနှောက်အာရုကြောရောံဂါတို့ဖြစ်တတ်၏။
သို့သော်နယုန်လမွေးဖွားသူတို့သည် ရောဂါကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ခဲပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက်အသက်ရူလေ့ကျင့်ခန်း(အာနာပါနကို အမြဲတမ်း ပြုလုပ်နေထိုင်ပါ။နယုန်လမွေးဖွားသူတို့သည် အများအားဖြင့် စိတ်အတက်အကျမြန်မယ်တစ်ချီကောင်း ပွပေါက်ကြံတတ်သည်။ ယုံကြည်ရာ စွတ်လုပ်တတ်၏။ထို့ကြောင့်ဘ၀သည်လည်း အတက်အကျမြန်၏။ ရွှေတစ်နေ့ငွေတစ်နေ့ဖြစ်နေတတ်ပါသည်အိမ်ထောင်ရေးတွင်လည်း သာယာနေပြီးမှ ရုတ်တရက် ပြိုကွဲသွားတတ်၏။
အပြောင်းအလဲမြန်ပြီးဆန်းသစ်မှုကို လိုလားမည်။ ခေါင်းမာစွာတဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ် သူတစ်ပါးအတွက်လည်း စွန့်လွှတ်ရဲတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း စွန့်လွှတ်ရဲ၏။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေမှန်ရာကိုပြောတတ်၊ လုပ်တတ်လွန်းသဖြင့် အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်တတ်၏။ ငွေကြေးအထူးကံကောင်းတတ်တယ် မထင်မှတ်သော အမွေအနှစ်၊ ထီပေါက်စသော ပွပေါက်များကြုံပြီး ထိပ်သို့ရောက်သွားတတ်၏။ အသင်းအဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီတို့တွင်နေရာကောင်းရသွားပြီးကြီးပွားသွားတတ်တယ် ။မိဘဆွေမျိုး အထောက်အပံ့ရမှုနည်းတတ်ပြီး ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်ရပ်တည်အောင်မြင်တတ်ကြသည်။
ဆွေမျိုးများထက်သူတစိမ်း၊ လူမျိုးခြားကောင်းကျိုးခံစားရပြီး ကြီးပွားတတ်၏။ဘ၀တွင် သူတစ်ပါးတို့၏ မနာလိုမှု၊ ဝေဖန်မှု၊တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို မကြာခဏခံရတတ်တယ်ချီးမွမ်းမှုထက်
ကဲ့ရဲ့မှုပြုလိုသူများသာမကြာခဏခံရမည်။ နယုန်လမွေးဖွားသူတို့သည်အပေါင်းအဖော်မက်မောသော်လည်း အခြေအနေအရ တစ်ယောက်တည်းနေရသော အခါမျိုးတွင်လည်း ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်၍ တိုက်ခိုက်ပြောဆို၍ ရင်ဆိုင်မည်ဆိုသောရန်လိုစိတ်ပယ်ပါ။အေးအေးဆေးဆေးပဲဟု သဘောထား၍လုပ်ပါမယုံသင်္ကာစိတ်၊ စိတ်အားငယ်စိတ်တို့ကို ပယ်ပါ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ပြောဆိုဖြေရှင်းပါ။
လုပ်ကိုင်ပြုမူပါ။အထူးသဖြင့် အဖြူရောင်၊ ငွေရောင်၊ အဝါနုရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်တို့ကို အထူးဆောင်ပါ။ အနက်၊ အညို ရှောင်ပါ။ စိန်ကိုပလက်တီနနှင့်ကွင်းပြီး လက်စွပ်ဝတ်ပါ။ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအားလုံး ပလက်တီနမ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ရွှေနှင့်ဖြစ်စေ စိန်ကိုလက်စွပ်ကွင်းပြီး လက်ခလယ်တွင် ၀တ်ဆင်ထားပါ။အမျိုးသားများကြောင်ကျောက်ကို ရွှေနှင့်ကွင်းပြီး လက်ညှိုးတွင် ၀တ်ဆင်ထားပါ။နှင်းဆီပန်းကို အထူးဆောင်နိုင်၏။ နှင်းဆီပန်းအဝါ၊ အဖြူလာဘ်ကောင်းပါမည်။
သငျ့ဇာတာမှာ ဘယျလိုအိမျမြိုးနဲ့နရေမလဲ ဆိုတာ လှယျလှယျကူကူ တှကျခကျြနညျး
(ဆရာ ဇငျယျောနီ ၏ရှအေိမျတျော အဖှငျ့ကမျြး “မှ,,မြှဝပေါသညျ)စရဏ~ကြျောဉာ
သင့်ဇာတာမှာဘယ်လိုအိမ်မျိုးနဲ့နေရမလဲမိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍( ၇ )ဖြင့်စားပါ
၁ ကြွင်းသော်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများနှင့် အကျိုးပေးအား နည်းတတ်သည်မကြာခဏ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသောသူများဖြစ်တတ်သည်တစ်နေရာတည်း၌အခြေချရန်ခက်ခဲတတ်သည်။ အိမ်၌စွဲမြဲစွာနေလျှင်လည်းကျန်းမာရေးညံ့လာတတ်ပေသည်။
၄ ကြွင်းသော်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနှင့်နေထိုင်ရမည့်ကံပါသူဖြစ်သည်။ရုတ်တရက်အမွေရခြင်း ထီပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားတက်၍လည်းကောင်း ဆုရခြင်းမဲပေါက်ခြင်း လက်ဆောင်ရခြင်းကြီးကဲသူတို့ကချီးမြှင့်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနှင့် နေထိုင်ရတတ်သည်။
(ဆရာ ဇင်ယော်နီ ၏ရွှေအိမ်တော် အဖွင့်ကျမ်း “မှ,,မျှဝေပါသည်)စရဏ~ကျော်ဉာဏ်သိ